အာရုံကြောဆိုင်ရာဗေဒနှင့်အပြုအမူစွဲလမ်းမှု၏မျိုးရိုးဗီဇကို ဦး တည်ချက်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - သုတေသနသစ်တစ်ခု(ရိယာ (၂၀၁၃)၊
J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ စာရေးသူစာမူ၊ PMC မေလ 1, 2014 တွင်ရရှိနိုင်ပါ။
J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ မေလ ၂၀၁၃; 2013 (58): 5-260 ။
ရောဘတ်အက်ဖ် Leeman, Ph.D ဘွဲ့ကို1 နှင့် မာ့ခ် N. Potenza, MD Ph.D ဘွဲ့ကို1,2
ဤသုံးသပ်ချက်သည်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲချက်များတွင် neurobiological နှင့် genetic တွေ့ရှိချက်များကိုအကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြပြီး၊ ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာရောဂါများနှင့်ပတ်သက်သည့်တွေ့ရှိချက်များကိုနှိုင်းယှဉ်လေ့လာပြီးအနာဂတ်သုတေသနအတွက်အကြံဥာဏ်များပေးသည်။ ဦး နှောက်လုပ်ဆောင်မှု၊ neurotransmitter လှုပ်ရှားမှုနှင့်လောင်းကစားခြင်း၊ အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်း၊ ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားခြင်း၊ စျေးဝယ်ခြင်း၊ အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုသည် ဦး နှောက်ဒေသများ၊ သိမြင်မှုဆိုင်ရာတာဝန်များကိုထည့်သွင်းထားသောပုံရိပ်လေ့လာမှုများမှတွေ့ရှိချက်များမှာ cue-induction studies ထက် ပို၍ တသမတ်တည်းဖြစ်ခဲ့သည်။ အစောပိုင်းရလဒ်များအဖြူနှင့်မီးခိုးရောင်ကိစ္စကွဲပြားခြားနားမှုအကြံပြုအပ်ပါသည်။ Neurochemical တွေ့ရှိချက်များက dopaminergic နှင့် serotonergic systems များအတွက်အခန်းကဏ္suggestကိုဖော်ပြပေမယ့်လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများမှရလဒ်များကပိုပြီးရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပုံရသည်။ အကန့်အသတ်ရှိနေသော်လည်း၊ မိသားစုသမိုင်း / မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာအချက်အလက်များသည်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်းအတွက်အစဉ်အလာကိုပံ့ပိုးပေးပြီးအမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုရှိသူများသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါအချို့နှင့်ရင်းနှီးသောမိသားစုဝင်တစ် ဦး ရှိရန်ပိုဖြစ်နိုင်သည်။ neurobiological နှင့်မျိုးရိုးဗီဇ / မိသားစုသမိုင်းတွေ့ရှိချက်များအကြားနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာများနှင့်မဟုတ်သောဆေးစွဲမှုများတွင်ဤအပြုအမူများတွင်မဖြစ်မနေပါ ၀ င်မှုသည်စွဲလမ်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ယနေ့အထိတွေ့ရှိချက်များသည်အထူးသဖြင့်စျေးဝယ်ခြင်း၊ မျိုးဗီဇနားလည်မှုအစောပိုင်းအဆင့်မှာရှိပါတယ်။ အနာဂတ်သုတေသနလမ်းညွှန်များကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။
keywords: လောင်းကစားခြင်း၊ အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်း၊ ဗီဒီယိုဂိမ်းများ၊ စျေးဝယ်ခြင်း၊ kleptomania၊ လိင်အပြုအမူ၊ neuroimaging၊ တိုကျရိုကျဒေသများ၊ striatum, serotonin
လောင်းကစား၊ စျေးဝယ်ခြင်း၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၊ အင်တာနက်အသုံးပြုမှုနှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားခြင်းစသည့် hedonic အရည်အသွေးများ (အနည်းဆုံးအစပိုင်းတွင်) ရှိသည့်အပြုအမူများသည်လူနည်းစုလူနည်းစုများကြားအတင်းအကျပ်ဆက်ဆံမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ အလွန်အကျွံအဆင့်များတွင်ဤအပြုအမူများ DSM-IV-TR အတွက် "အခြားနေရာများတွင်ခွဲခြားမဟုတ်သော Impulse ထိန်းချုပ်မမှန်" စဉ်းစားနေကြသည်1သို့သော်၎င်းတို့သည်ပစ္စည်းမဟုတ်သောသို့မဟုတ် "အမူအကျင့်" စွဲလမ်းမှုအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရနိုင်သည်2-7။ လောင်းကစားခြင်း၊ စျေးဝယ်ခြင်း၊ လိင်ခြင်း၊ ဂိမ်းကစားခြင်းနှင့်အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းတို့သည်ပုံမှန်အပြုအမူများဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်ပုံမှန်နှင့်အလွန်အကျွံပါဝင်မှုကိုခွဲခြားရန်ခက်ခဲနိုင်သည်။5။ နောက်ထပ်စိန်ခေါ်မှုများသည်သူတို့၏အမျိုးအစားခွဲခြားမှုကိုပိုမိုရှုပ်ထွေးစေသည့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုများ၏ရောဂါလက္ခဏာများတွင်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောခြင်းမှဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်8။ အမူအကျင့် (ပစ္စည်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်) စွဲလမ်းမှုအခြေခံသည့်ယန္တရားများသည်အတော်အတန်အားနည်းစွာနားလည်သည်။9,10 လျော့နည်းရိုးရှင်းသောသို့မဟုတ်အပြုအမူစွဲဘို့အဆင့်မြင့်ဖြစ်ကြသည်8,11,12.
အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုသည်အရေးပါသောဒြပ်စင်များကိုပစ္စည်းစွဲလမ်းမှုနှင့်အတူမျှဝေသည်။ ၎င်းတို့တွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုအားနည်းခြင်း၊ အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးဆက်များနှင့်အဆိုးမြင်မှုများနှင့်စွဲလမ်းမှုများကြားမှဆက်လက်ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းတို့ပါဝင်သည်6,13။ အမူအကျင့်နှင့်ပစ္စည်းစွဲစွဲလမ်းမှုသည်မကြာခဏပူးတွဲဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်14,15 နှင့်ရောဂါများ၏တိုးတက်မှုအတွက်တူညီရှိပါတယ် (ဥပမာ, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူကြီးများအတွက်အခြေအနေများနှုန်းမြင့်မားခြင်း, အနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်လှုံ့ဆျောမှုနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိ "အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်း" ဖြစ်ရပ်ဆန်း6,16).
အလားတူ neurobiological features တွေပစ္စည်းဥစ္စာများနှင့်အမူအကျင့်စွဲနှစ် ဦး စလုံး၏အခြေခံ8,17,18ဦး နှောက်လုပ်ဆောင်မှုနှင့်အာရုံကြောဓာတုဗေဒဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များပါဝင်သည်8။ Cross-sensitization တွင် neuro-adaptations ပါ ၀ င်သောကြောင့်ဆေးတစ်မျိုးတည်းဖြင့်ထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့ခြင်းသည်အခြားတစ်ခုကိုပိုမိုအားကောင်းသောတုန့်ပြန်မှုဖြစ်စေသည်8။ ပစ္စည်းမဟုတ်သောစွဲချက်များကိုလေးစားမှုဖြင့်အလွဲသုံးစားမှုပစ္စည်းများကိုထိတွေ့ခြင်းသည်သဘာဝဆုလာဘ်နှင့်အပြန်အလှန်အားသိသာစေနိုင်သည်8,19-21။ ဤတွေ့ရှိချက်များသည်လောင်းကစားခြင်းကဲ့သို့သောအပြုအမူများအထိမည်သည့်အတိုင်းအတာအထိထပ်မံစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်ကိုဖော်ပြသည် အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးအားလုံးသည် mesolimbic dopamine လမ်းကြောင်းသည်အထူးအရေးကြီးသောကြောင့် ဦး နှောက်၏“ ဆုချီးမြှင့်သော circuit” ကိုအကျိုးသက်ရောက်သည်။ ဤလမ်းကြောင်းသည် ventral tegmental fromရိယာမှနျူကလိယ accumbens (NAc) အထိတိုးချဲ့သော dopaminergic အာရုံခံများပါဝင်သည်။22-25။ အလွန်မြင့်မားသော (သို့) အလွန်နိမ့်သောဒိုမီမင်ပမာဏများသည်အလွန်သေးငယ်သောကြောင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းအပါအ ၀ င်ထကြွလွယ်သောအန္တရာယ်များကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။26။ သဘာဝဆုများနှင့်အလွဲသုံးစားမှုရှိသောပစ္စည်းများသည်အလားတူလုပ်ဆောင်မှုကိုဆုချီးမြှင့်သော circuit နှင့် amygdala, hippocampus နှင့် frontal cortex အပါအ ၀ င်ချိတ်ဆက်ထားသောဒေသများတွင်အလားတူလုပ်ဆောင်မှုဖြစ်ပေါ်စေသည်။8.
ပစ္စုပ္ပန်ပြန်လည်သုံးသပ်အပြုအမူစွဲနှငျ့ပတျသကျသော neurobiological နှင့်မျိုးရိုးဗီဇ / မိသားစုသမိုင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုစဉ်းစား။ ကျွန်ုပ်တို့၏နည်းစနစ်များကိုဖော်ပြပြီးသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည် ဦး နှောက်လုပ်ဆောင်မှုကိုဆွေးနွေးကြသည်။စားပွဲတင် 1) neurotransmitter စနစ်များ (စားပွဲတင် 2) နှင့်မိသားစုသမိုင်း / မျိုးရိုးဗီဇတွေ့ရှိချက်များ (စားပွဲတင် 3အမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုခြောက်ခုနှင့်ဆက်စပ်မှု - အဓိကအားဖြင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်း၊ အင်တာနက်ပြuseနာနှင့်ဒုတိယဂိမ်းကစားခြင်းပြ;နာ၊ နှင့်တတိယအနေဖြင့် compulsive စျေးဝယ်ခြင်း, kleptomania နှင့် hypersexuality ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မူးယစ်ဆေးစွဲစွဲလမ်းမှုတွေ့ရှိချက်များနှင့်တူညီမှုနှင့်ကွဲပြားခြားနားမှုများကိုမီးမောင်းထိုးပြပြီးနိဂုံးချုပ်ကိုဖော်ပြပြီးအနာဂတ်သုတေသနအတွက်အကြံပြုချက်များကိုတင်ပြသည်။ ကူးစက်ရောဂါနှင့်လက်တွေ့တွေ့ရှိချက်များကိုအတိုချုပ်ရှင်းပြထားသည်။ သို့သော်များစွာသောမကြာသေးမီကပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း2,31 နှင့်တည်းဖြတ်အသံအတိုးအကျယ်14 ဒီခေါင်းစဉ်များဖြေရှင်းခဲ့ကြသည်။ ကျန်းကျန်းမာမာသို့မဟုတ်ပါကင်ဆန်ရောဂါပါ ၀ င်သူများပါ ၀ င်သောလေ့လာမှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ချန်လှပ်ခဲ့သည်။ PD လေ့လာမှုများသည်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုအတွက်အသုံးဝင်သောမော်ဒယ်တစ်ခုပေးသော်လည်းထိုတွေ့ရှိချက်များသည် PD မဟုတ်သောလူနာများနှင့်သက်ဆိုင်မှုအတိုင်းအတာသည်မသေချာမရေရာပါ။ 32,33).
အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုခြောက်ခုနှင့်တူခြင်းနှင့်အမူအကျင့်စွဲခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုဆိုင်ရာရောဂါများ (SUDs) တွင်အဓိကရလဒ်များနှင့်ရှေ့နောက်မှ striatal တွေ့ရှိချက်များကိုအာရုံစိုက်ခြင်းဖြင့် ဦး နှောက်လုပ်ဆောင်မှု / neuroimaging ရလဒ်များကိုခြုံငုံသုံးသပ်ချက်။
အမူအကျင့်စွဲခြောက်မျိုးနှင့်တူညီမှုနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာရောဂါများအတွက်အဓိကရလဒ်များမှကွဲပြားမှုများတွင် neurotransmitter system ပါဝင်မှု၏ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
အပြုအမူဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှု ၆ ခုနှင့်မျိုးရိုးဗီဇသုံးစွဲမှုဆိုင်ရာရောဂါများအတွက်အဓိကရလဒ်များနှင့်ကွဲပြားမှုနှင့်မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာရလဒ်များကိုခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
စာပေရှာဖွေမှုကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်မေလတွင် Medline နှင့် Google Scholar တို့ဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ရှာဖွေမှုတစ်ခုစီသည်အထွေထွေရှာဖွေရေးဝေါဟာရ (neuro *, MRI, PET, ပုံရိပ်နှင့်မျိုးရိုးဗီဇ *) ကို အသုံးပြု၍ အောက်ပါအကျင့်စွဲစွဲလမ်းမှုတစ်ခု (ကွင်းကွင်း၌ရှာဖွေခြင်းဝေါဟာရများ) ကို အသုံးပြု၍ လောင်းကစားခြင်း (လောင်းကစား *)၊ စျေးဝယ်ခြင်း (မလိုက်နာသောစျေးဝယ်ခြင်း) ဈေးဝယ်စွဲသူ *၊ အတင်းအကျပ် ၀ ယ်ယူခြင်း၊ kleptomania (kleptomania, steal)၊ လိင်အပြုအမူ (မရှောင်မလွှဲလိင်၊ လိင် * စွဲ *)၊ အင်တာနက် (အင်တာနက်စွဲလမ်း *၊ မလိုက်နာသောအင်တာနက်) နှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားခြင်း (ဗီဒီယို gam *) ။ ပြန်လည်နေရာချထားသည့်နေရာအကျယ်အ ၀ န်းနှင့်အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းအရာများအရ၊
လောင်းကစားခြင်း၊ လှုံ့ဆော်မှုထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းနှင့်ဆုချီးမြှင့်ခြင်းဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းတို့ကိုအကဲဖြတ်ခြင်း၊ PG နှင့်မူးယစ်ဆေးစွဲမှုများအကြားတူညီမှုနှင့်ကွဲပြားခြားနားမှုများကိုဖော်ပြသည့်တွေ့ရှိချက်များကိုမကြာသေးမီကပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့သည်18.
PG အတွက် ဦး နှောက် function ကို
neuroimaging လေ့လာမှုအများစုသည်တိုကျရိုကျ cortical andရိယာမြားနှငျ့ striatum ကဲ့သို့သောအခွားဒေသမြားတှငျပါဝငျသညျ။ ယေဘုယျအားဖြင့်သိမြင်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကိုအခြေခံသည့် ဦး နှောက်လုပ်ဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်သောတွေ့ရှိချက်များသည် cue-induction တွေ့ရှိချက်များထက်ပိုမိုတသမတ်တည်းဖြစ်သည်။
cue-induction လေ့လာချက်များအရ frontal ဒေသများရှိ dysfunction သည် disfunction ၏တိကျသောသဘောသဘာဝကိုမရှင်းလင်းပေ။ cue- ထိတွေ့မှုလုပ်ငန်းများတွင် PG (ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်) ပါ ၀ င်သူများသည် ventrolateral နှင့် ventromedial prefrontal cortices (vlPFC နှင့် vmPFC) တွင်တက်ကြွမှုကိုလျော့နည်းစေသည်7,34ပြ,နာကစားသမားအခြား cue- တင်ဆက်မှုလေ့လာမှုများပေမယ့်35 နှင့် PG36 တိုးမြှင့်တိုကျရိုကျ activation ပြသခဲ့ကြသည်။ လေ့လာမှုတစ်ခုလုံးမှတွေ့ရှိချက်များအကြားကွဲပြားခြားနားမှုများသည်လုပ်ငန်းဒီဇိုင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဆိုင်ရာချဉ်းကပ်မှုများနှင့်သက်ဆိုင်နိုင်သည်။ သိမြင်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများအတွင်းပုံရိပ်ဖြင့်ပြုလုပ်သောလေ့လာမှုများသည် PG ရှိ vmPFC ကဲ့သို့တိုကျရိုကျသောinရိယာမြားတှငျလကျရှိလှုပ်ရှားမှုအားပိုမိုတသမတ်တည်းပြသလျက်ရှိသည်။37-40 ပြproblemနာ / PG အတွက်တိုကျရိုကျ activation တိုးမြှင့်ကိုလည်းအစီရင်ခံခဲ့သည်ပေမယ့်41,42.
လေ့လာမှုများစွာသည် PG တွင် striatum ကိုဆိုလိုသည်။ Co-morbid စိတ်ကြွစိတ်ကျရောဂါနှင့်အတူ PG လူနာအကြားလျော့နည်း ventral striatal ဂလူးကို့စဇီဝြဖစ်ပျက်ခြင်းနှင့် dorsal striatum တွင်တိုးပွားလာသောဇီဝြဖစ်စဉ်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်43။ သို့သော်အနားယူနေသည့်အချိန်၌ PET (positron ထုတ်လွှတ်ခြင်း tomography) လေ့လာမှုများတွင် PG နှင့် D2 ကဲ့သို့သော receptor ရှိကျန်းမာသန်စွမ်းသောထိန်းချုပ်မှုများအကြားသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုမရှိချေ။44,45 အဆုံးစွန်သောအမှု၌ ventral striatum / pallidum အတွက်ပြproblemနာ - လောင်းကစားပြင်းထန်မှုနှင့်ဆက်နွယ်နေကြောင်းပေမယ့် ventral နှင့် dorsal striata အတွက်သို့မဟုတ် serotonin 1B အဲဒီ receptor ရရှိမှု။46။ လောင်းကစား - cue ထိတွေ့မှုကာလအတွင်း functional-magnetic-resonance- ပုံရိပ် (fMRI) လေ့လာမှုများတွင် ventral တွင် activation လျော့နည်းကြောင်းလေ့လာတွေ့ရှိရသည်။7 နှင့် dorsal striatum47 PG (ထိန်းချုပ်မှုနှိုင်းယှဉ်); သို့သော် PG / ပြproblemနာလောင်းကစားနမူနာအတွက် ventral striatum အတွက်အပျက်သဘောဆောင်သောရလဒ်များကိုရှိခဲ့သည်35,36။ အလုပ်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ဆက်နွယ်သောလုပ်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ တွေ့ရှိချက်အများစုသည် PG တွင် ventral လှုပ်ရှားမှုလျော့နည်းသွားသည်ကိုဖော်ပြသည် (PG မဟုတ်သည့်နှိုင်းယှဉ်မှု)38,40,48 မြင့်မားသော dorsal လှုပ်ရှားမှုအချို့သက်သေအထောက်အထားများနှင့်အတူ42,48။ လေ့လာမှုများအကြားတွေ့ရှိချက်အချို့ကွဲပြားခြားနားမှုဖွယ်ရှိအသုံးပြုတိကျတဲ့အလုပ်များကိုမှ attribute ဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင် ventral ကိုယ်ဝန်ဆောင်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ပတ်သက်သောကွဲပြားခြားနားမှုအချို့လေ့လာမှုများပြproblemနာလောင်းကစားဝိုင်းပါဝင်သောကြောင့်ဘာသာရပ်အုပ်စုများနှင့်ဆက်စပ်လိမ့်မည်49 သို့မဟုတ်ရောနှောပြproblemနာလောင်းကစား / PG အုပ်စုများ41 အဘယ်သူသည်ကွဲပြားခြားနားသောဇီဝတုံ့ပြန်မှုရှိစေခြင်းငှါ။ Linnet et al မှတွေ့ရှိချက်များ။44,45 PG နမူနာသည်အိုင်အိုဝါလောင်းကစားလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ventral striatum တွင်မြင့်မားသော dopamine လွှတ်ပေးမှုကိုပြသခဲ့သူများနှင့်အညီအမျှခွဲဝေခြင်း၌ကွဲပြားကြောင်းတစ် ဦး ချင်းကွဲပြားမှုကိုအကြံပြုပါ။ impulsivity နှင့်ဆက်စပ်သောအလုပ်များနှင့်အတူကန့်သတ်တွေ့ရှိချက် PG နှင့်ထိန်းချုပ်မှုအကြား striatal activation အတွက်သိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုပြသခဲ့သည်50,51.
အခြား ဦး နှောက်ဒေသများနှင့် ပတ်သက်၍ PG ဘာသာရပ်များ (ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်) သည်လောင်းကစားခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်ပြီးနောက် ACC လှုပ်ရှားမှုနှင့်ကွဲပြားသည်7,34။ cue တင်ဆက်မှုစဉ်အတွင်း PG အတွက်အတော်လေးလျော့နည်း insular activation7 နှင့်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့အစီရင်ခံခဲ့သည်40။ အတော်လေးညံ့ဖျင်းသောအဖြူရောင်ကိစ္စသမာဓိသည်လှုံ့ဆော်မှုနှင့်ဆက်နွယ်သည်52 နှင့် PG နှင့်အတူသူများအကြား corpus collosum အပါအဝင်ဒေသများရှိထိန်းချုပ်မှုနှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည်53,54။ PG နှင့်ထိန်းချုပ်မှုများအကြားအဖြူနှင့်မီးခိုးရောင်ကိစ္စအသံအတိုးအကျယ်ကွဲပြားမှုများအတွက်အပျက်သဘောဆောင်သောရလဒ်များကိုတွေ့ပြီ53.
အချုပ်အားဖြင့် PG ရှိပုံရိပ်ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်များသည် frontal cortical area နှင့် striatum တို့ကိုဆိုလိုသည်။ စွန့်စားရမှု၊ ဆုချခြင်း၊ လောင်းကစားခြင်းနှင့်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ခြင်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သောအလုပ်များသည်ပုံမှန်အားဖြင့် PG တွင်တိုကျရိုကျဒေသမြားနှငျ့ ventral striatum များတွင်လှုပ်ရှားမှုလျော့နည်းလာသည်။ အစောပိုင်းရလဒ်များအရအင်ဆူလင်လှုပ်ရှားမှုလျှော့ချခြင်းနှင့် PG တွင်မကောင်းသောအဖြူရောင်သမာဓိရှိမှုကိုဖော်ပြသည်
PG အတွက် Neurotransmitter လှုပ်ရှားမှု
တွေ့ရှိချက်အများစုသည် dopamine နှင့် serotonin တို့နှင့်ဆက်စပ်သည်။ dopamine ကမောက်ကမဖြစ်မှု PG များအတွက်ယူဆချက်ထားပြီးနေစဉ်55တွေ့ရှိချက်များမှာအပြီးသတ်သောရလဒ်ဖြစ်သည်။ ဒေတာ44,45 အိုင်အိုဝါလောင်းကစား Task ကိုစဉ်အတွင်း PG နှင့် dopamine လွှတ်ပေးရေးအတွက်တစ် ဦး ချင်းကွဲပြားမှုအကြံပြုပေမယ့် D2 ကဲ့သို့အဲဒီ receptor ရရှိမှုနှင့်ပတ်သက်။ အဘယ်သူမျှမအခြေခံအကြားကွဲပြားခြားနားမှုအကြံပြုအပ်ပါသည်။ PG နှင့်ထိန်းချုပ်သည့်အဖွဲ့များသည် slot-machine-task performance တွင်အလားတူ dopamine ထုတ်လွှတ်မှုကိုပြသော်လည်း dopamine ထုတ်လွှတ်မှုသည် PG တွင်ပြPနာ - လောင်းကစားခြင်းပြင်းထန်မှုနှင့်ဆက်နွယ်သည်။56 အမ်ဖီတမင်းဆေးအုပ်ချုပ်ရေးသည်ပြproblemနာရှိသည့်လောင်းကစားသမားများအကြားတွင်လောင်းကစားခြင်းကိုတိုးမြှင့်ခဲ့သည်57။ D2 ကဲ့သို့သောရန်သူ haloperidol သည် PG တွင်လောင်းကစားခြင်း၏တိုးပွားမှုနှင့်လည်းဆက်စပ်နေသည်58တစ် ဦး ချင်းကွဲပြားခြားနားမှုအရေးကြီးသောပေါ်လာပေမယ့်59။ တစ် ဦး ချင်းကွဲပြားခြားနားမှုများသည် D2 ကဲ့သို့သောဆေးဝါးများနှင့် ပတ်သက်၍ မကောင်းသောလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများကိုရှင်းပြနိုင်သည်60,61.
ကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းများနှင့်အတူ neurochemical လေ့လာမှုများအနေဖြင့်တွေ့ရှိချက် PG ဘာသာရပ်များနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအကြား serotonergic function ကိုအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုအကြံပြုအပ်ပါသည်18,62-67။ serotonin-reuptake inhibitors (SRIs) နဲ့ 5HT2-receptor antagonist တွေပါ ၀ င်တဲ့လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေကအနှုတ်လက္ခဏာရောရောထွေးနေပါတယ်။60,61,68-72။ neurochemical လေ့လာမှုများ PG အတွက် serotonergic ကမောက်ကမဖြစ်မှုညွှန်ပြနေစဉ်, ရောထွေးလက်တွေ့တွေ့ရှိချက်အရေးကြီးသောတစ် ဦး ချင်းကွဲပြားမှုအကြံပြုအပ်ပါသည်။
အခြား neurotransmitters နှင့်စပ်လျဉ်း, opiate ရန်နှင့်အတူအများအပြားအပြုသဘောလက်တွေ့ - စမ်းသပ်မှုတွေ့ရှိချက်73-76 (ကြည့်ရှု 77 အနှုတ်လက္ခဏာရလဒ်များအတွက်) PG အတွက် opioidergic ပါဝင်ပတ်သက်မှုအကြံပြုအပ်ပါသည်။ အချိုမှုနဗ်ကြောဆဲလ်ကိုပြောင်းလဲစေသောဆေးဝါးများအတွက်ထိရောက်မှု၏ပဏာမသက်သေအထောက်အထား78,79 အချိုမှုန့်သည် PG တွင်ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်သောအပြုအမူများနှင့်ကုသမှုရလဒ်များကိုအထောက်အကူပြုနိုင်သည်ဟုအကြံပြုသည်79။ မြင့်မားသော adrenergic အေးဂျင့်များနှင့်၎င်းတို့၏ metabolites PG အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်80,81။ Norepinephrine ပမာဏသည်လောင်းကစားတွင်ပြproblemနာရှိသည့်လောင်းကစားသမားများတိုးပွားလာသည်82။ PG တွင် clonidine ကိုတိတ်တခိုးကြီးထွားစေသောဟော်မုန်းတုံ့ပြန်မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်83မြင့်မားသော noradrenergic လျှို့ဝှက်ချက်များကိုထင်ဟပ်စေနိုင်သည်။
PG အတွက်မိသားစုသမိုင်း / မျိုးရိုးဗီဇ
လေ့လာမှုနှစ်ခုအရလောင်းကစားပြfactorsနာများသည်မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာအချက်များသည်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်များထက် ပို၍ အထောက်အကူပြုနိုင်သည်15,84,85။ PG မျိုးရိုးလိုက်ခြင်းခန့်မှန်းချက်သည် ၅၀ မှ ၆၀% အထိရှိသည်15ပိုမိုကြီးမားသောပြproblemနာ - လောင်းကစားခြင်းပြင်းထန်မှုနှင့်အတူတွေ့မြင်မျိုးရိုးဗီဇပံ့ပိုးမှုများကိုအတူ86။ မော်လီကျူးလေ့လာမှုများသည်မျိုးရိုးဗီဇမျိုးစုံတို့တွင်သေးငယ်။ ထပ်တိုးသက်ရောက်မှုများရှိသည်87။ PG နှင့် dopamine transmission (ဥပမာ DRD2) နှင့်ဆက်စပ်သောမျိုးရိုးဗီဇမူကွဲများအကြားဆက်နွယ်မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်88-92 (သို့သော်ကြည့်ပါ93 အနုတ်လက္ခဏာရလဒ်များအတွက်) ။ အဆိုပါ serotonin-transporter- ဗီဇကမကထဒေသအတွက်တစ်မူကွဲ (5-HTTLPR) ယောက်ျားအတွက် PG နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်94 နှင့် monoamine oxidase တစ် ဦး က (Mao-တစ်ဦးက) ပြင်းထန် PG နှင့်အတူအထီးအကြား95,96။ ဤရွေ့ကားလေ့လာမှုများနမူနာအရွယ်အစား, နမူနာစရိုက်လက္ခဏာတွေနှင့်သရုပ်ခွဲချဉ်းကပ်မှုနှင့်စပ်လျဉ်းမျိုးစုံကန့်သတ်ရှိသည်, ဤအချက်များပွားအတွက်မကိုက်ညီဆက်စပ်။
compulsive အင်တာနက်အသုံးပြုမှုအတွက် ဦး နှောက် function ကို
အနားယူနေသောပြည်နယ် fMRI လေ့လာမှုတွင်ဒေသဆိုင်ရာတစ်သားတည်းဖြစ်မှုတိုးမြှင့်မှုသည်ရှေ့တန်းဒေသများတွင် (ဥပမာ - သာလွန်သောရှေ့တန်း gyrus) နှင့်အခြားဒေသများ (ဥပမာ၊ တိုးမြှင့်ဒေသဆိုင်ရာတစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းသည်ဤဒေသများအကြားပိုမိုညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုကိုထင်ဟပ်စေနိုင်သည်။ အဆိုပါသက်ဆိုင်သောဒေသများအများအပြား "ဆုချီးမြှင့်ဆားကစ်" ၏အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ကြောင်းပေးထားသောဤတွေ့ရှိချက် compulsive အင်တာနက်အသုံးပြုသူများအကြားဆုလာဘ်ပိုမိုမြင့်မား sensitivity ကိုပိုမိုမြင့်မား sensitivity ကို97.
သေးငယ်။ ငြိမ်သက်နေသောပြည်နယ် fMRI နှင့် PET လေ့လာမှုတွင် D2 ကဲ့သို့သော receptor ရရှိနိုင်မှုကို dorsal striatum တွင်တွေ့ရသည်။ ဤဒေသရှိအလားအလာများနှင့်ဆက်စပ်နေသည့်အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုများအကြားဆိုးကျိုးများရှိသည်။ အဆိုပါ ventral striatum အတွက်ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏သက်သေအထောက်အထားများရှာမတွေ့ပါ98.
အခြား ဦး နှောက်ဒေသများနှင့်စပ်လျဉ်း။ ACC သည်အထက်ဖော်ပြပါအထက်ပါလေ့လာမှုတွင်အင်တာနက်သုံးစွဲသူများအကြားအနားယူခြင်းနှင့်ပြည်နယ်၏တစ်သားတည်းဖြစ်မှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည်။97။ အင်တာနက်သုံးစွဲသူများ (ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်) အဖြူ - အဖြူရောင်သမာဓိရှိမှုနှင့်မီးခိုးရောင်သိပ်သည်းဆ / အသံပမာဏကွဲပြားမှုများကိုတွေ့ရသည်။ diffusion-tensor ပုံရိပ် (DTI) ကို အသုံးပြု၍ orbitofrontal cortex, corpus collosum နှင့် cingulum တို့တွင်အက်ဖ်အေနိမ့်နိမ့်ကိုမလိုလားအပ်သောအင်တာနက်သုံးစွဲသူများ (ထိန်းချုပ်မှုနှိုင်းယှဉ်မှုများ) တွင်တွေ့မြင်နိုင်သည်။99။ MRI ကို အသုံးပြု၍ မီးခိုးရောင်အထူသိပ်သည်းဆကို ACC၊ နောက်ဘက် cingulate၊ insula နှင့် lingual gyrus စသည့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းများနှင့်ဆက်စပ်နေသည့်ဒေသများတွင်တွေ့ရှိရသည်။100။ သီးခြားလေ့လာမှုတစ်ခုအနေဖြင့်အက်ဖ်အေတန်ဖိုးများကိုလျှော့ချသည့် parahippocampal gyrus တွင်တွေ့ရှိရသည်101 နှင့် cerebellum, orbitofrontal cortex, dorsolateral prefrontal cortex (dlPFC) နှင့် ACC အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိအသံအတိုးအကျယ်။ ဒေသဆိုင်ရာမီးခိုးရောင်ကိစ္စများသည်အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုနှင့်ပြောင်းပြန်ဆက်စပ်နေသည်101။ ဤတွေ့ရှိချက်များအရအင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုအသုံးချခြင်းဖြင့်မီးခိုးရောင်လျော့နည်းစေနိုင်သည်။ သို့မဟုတ်မီးခိုးရောင်ပမာဏနည်းသောလူပုဂ္ဂိုလ်များသည်အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုနှုန်းကိုခန့်မှန်းနိုင်သည်။
အချုပ်အားဖြင့်အစောပိုင်းတွေ့ရှိချက်များအရဒေသတွင်းရှိဒေသဆိုင်ရာတစ်သားတည်းဖြစ်မှု၊ dorsal striatum တွင် D2 ကဲ့သို့သော receptor ရရှိမှုနည်းပါးခြင်း၊ အဖြူရောင်သမာဓိရှိခြင်းနှင့်အကျိုးနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများတွင်ပါ ၀ င်ပတ်သက်နေသည့်ဒေသများသို့အကျိုးသက်ရောက်သောမီးခိုးရောင် - သိပ်သည်းဆ / ပမာဏကွဲပြားခြားနားမှုများကအကြံပြုသည်။
အင်တာနက်ကိုသုံးရန် Neurotransmitter လှုပ်ရှားမှု
SPECT လေ့လာမှုတစ်ခုအရ dopamine Transporter သည်ငယ်ရွယ်သောအရွယ်ရောက်ပြီးသောအမျိုးသားများအကြားတွင်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အနိမ့်ဆုံးအဆင့်တွင်ဖော်ပြသည်။102။ လက်တွေ့ - စမ်းသပ်မှုရလဒ်များအရ, ထိန်းချုပ်ထား pharmacotherapy လေ့လာမှုများရှိခဲ့သည်5.
အင်တာနက်အသုံးပြုမှုအတွက်မိသားစုသမိုင်း / မျိုးရိုးဗီဇ
အန္တရာယ် - ရှောင်ရှားနိုင်သောပြproblemနာအင်တာနက်အသုံးပြုသူများသည် serotonin transporter (SS-) အတွက်မျိုးရိုးဗီဇကုဒ်ကိုတိုးမြှင့်သောဒေသတွင်မူကွဲအမျိုးမျိုးကိုမကြာခဏသယ်ဆောင်လေ့ရှိသည်။5-HTTLPR), စိတ်ဓာတ်ကျလူနာအကြားဘုံတစ်ခု allele103.
ဗီဒီယိုဂိမ်းနှင့်ပတ်သက်သောတွေ့ရှိချက်များကိုအင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ခွဲခြားထားသည်။ သို့သော် compulsive video-gaming အပေါ် neurobiological သုတေသနပုံမှန်အားဖြင့် web-based ဂိမ်းများပါဝင်သည်; ထို့ကြောင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းတွေ့ရှိချက်များကိုအင်တာနက်ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်များနှင့်ကွဲလွဲ။ မရပါ။
compulsive ဗီဒီယိုဂိမ်းထဲမှာ ဦး နှောက် function ကို
အနားယူခြင်း - PET စနစ်ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် orbitofrontal gyrus အလယ်အလတ် orbitofrontal gyrus တွင်ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုပိုမိုများပြားလာသည်ကိုတွေ့နိုင်ပြီး၎င်းသည်လျော်ကြေးပေးသည့်သိမှုအပြောင်းအလဲကိုထင်ဟပ်နိုင်သည်။104။ လျော့နည်းသွားသောဇီဝြဖစ်ပျက်ခြင်းသည် precentral gyrus တွင်တွေ့ရှိရပြီး၎င်းသည်အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များအပေါ်အာရုံမခံစားနိုင်မှုကိုထင်ဟပ်စေနိုင်သည်104။ cue-ထိတွေ့မှုလေ့လာမှုများတွင် orbitofrontal cortex (OFC)၊ medial frontal cortex နှင့် dlPFC တို့မှအင်တာနက်အသုံးပြုသူများ (ထိန်းချုပ်မှုနှိုင်းယှဉ်မှုများ) တွင်ပိုမိုသောလှုပ်ရှားမှုတိုးတက်ကြောင်းညွှန်ပြသောကြိုတင်နှင့် cue-post အပြောင်းအလဲများကိုလေ့လာခဲ့သည်။105။ နောက်လေ့လာမှုတစ်ခုတွင် dlPFC တွင်ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကလက်ရှိ compulsive ကစားသမားများအကြားပိုမိုကြီးမားသောကြိုတင် / cue အပြောင်းအလဲများကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။106။ cue- induction စဉ်အတွင်း pre- နှင့် Post- ကုသမှု fMRI တစ်ခု open-label ကို bupropion ရုံးတင်စစ်ဆေးသို့ထည့်သွင်းခဲ့သည်107။ အခြားလေ့လာမှုများနှင့်ဆင်တူသည် dlPFC (ထိန်းချုပ်မှုများနှိုင်းယှဉ်မှု) တွင်ပိုမိုအားကောင်းသောလုပ်ဆောင်မှုကို ၆ ပတ်ကုသမှုကာလအပြီးတွင် dlPFC ၏လှုပ်ရှားမှုကျဆင်းသွားခဲ့သည်။ ငွေကြေးဆိုင်ရာအနိုင်ရရှိမှုနှင့်ဆုံးရှုံးမှုများနှင့်ပတ်သက်သောကွန်ပျူတာအခြေပြုခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည့် fMRI လေ့လာမှုတစ်ခုတွင်အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုသူများအကြားအနိုင်ရရှိမှုစမ်းသပ်မှုများတွင် OFC တွင်ပိုမိုပါဝင်မှုကိုတွေ့ရှိရပြီး၊108.
Striatal လုပ်ဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်ဘက် caudate မှာဇီဝြဖစ်ပျက်မှုပိုမိုများပြားလာတယ်104။ fMRI အတွင်းထိန်းချုပ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကပိုမိုကြီးမားသောလုပ်ဆောင်မှုကို cue မှ induction ကိုညာဘက် NAc နှင့် compulsive game-players တွင်မှန်ကန်သော caudate ၌တွေ့ရသည်။105.
ACC နှင့် insula တို့သည်ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားရာတွင်ပါ ၀ င်ပတ်သက်မှုရှိသည်။ cue- သော induction fMRI လေ့လာမှုမှာ106ပိုမိုများပြားသောလှုပ်ရှားမှုများကို ACC တွင်မအောင်မြင်သောဂိမ်းကစားသူများအကြားတွင်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဆုလာဘ်အပြည့်အစုံတွက်ချက်ခြင်းလုပ်နေစဉ်အတွင်း compulsive video-gamers (controls နှိုင်းယှဉ်မှုများ) တွင်ဆုံးရှုံးမှုစမ်းသပ်မှုများအတွင်း ACC activation လျော့နည်းသွားသည်ကိုတွေ့ရှိရပြီး၊108။ တိုးမြှင့် insular လှုပ်ရှားမှုကြွင်းသောအရာမှာတွေ့ရှိခဲ့သည်104။ compulsive game- ကစားသမား thalamus အတွက်တိုးမြှင့်အသံအတိုးအကျယ်ကိုသရုပ်ပြပေမယ့်ယုတ်ညံ့ယာယီ, ညာဘက်အလယ်နှင့်လက်ဝဲယုတ်ညံ့ occipital gyri အတွက်အသံအတိုးအကျယ်လျော့နည်းသွားသည်109.
အချုပ်အားဖြင့်လူငယ်များအထီးကျန်အနိုင်ကျင့်ခြင်းကစားသူများ၏နမူနာများမှတွေ့ရှိချက်များအရအနားယူခြင်း၊ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်ရယူခြင်းနှင့်တိုကျိုနယ်မြေများ၊ striatum နှင့်အခြားဒေသများရှိလှုပ်ရှားမှုများပိုမိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ဆုံးရှုံးမှုရလဒ်များအားထိခိုက်လွယ်မှုကိုလျှော့ချခြင်းတို့ကဖော်ပြသည်။ လှုပ်ရှားမှုတိုးတက်မှု၏တွေ့ရှိချက်များသည် PG လေ့လာမှုတွေ့ရှိချက်များနှင့်ဆန့်ကျင်နေသည်။ compulsive video-gaming တွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေသည့်asရိယာများသည်အပြောင်းအလဲအတွက်၊ လှုံ့ဆော်မှုထိန်းချုပ်မှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်တို့ကိုဆုချရန်အထောက်အကူပြုပုံရသည်။
compulsive ဗီဒီယိုဂိမ်းထဲမှာ Neurotransmitter လှုပ်ရှားမှု
dopaminergic ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏အခန်းကဏ္proposedကိုအဆိုပြုထားသည်110။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောမျိုးရိုးဗီဇတွေ့ရှိချက်များကဗီဒီယိုဂိမ်းကစားခြင်းတွင် dopaminergic ပါဝင်မှုများနှင့်ကိုက်ညီသည်110.
မိသားစုသမိုင်း / မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာဗီဒီယိုဂိမ်းကစားခြင်း
ကန့်သတ်မော်လီကျူးမျိုးရိုးဗီဇသုတေသနဖျော်ဖြေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ၏ allelic မူကွဲ DRD2 ပြောင်းလဲထားသော dopamine အချက်ပြမှုနှင့်ဆက်နွယ်သော Taq1A1 allele သည် compulsive video-gaming ကိုအထောက်အကူပြုရန်အကြံပြုထားသည်။ အထီးကစားသမားများအကြား, Taq1A1 allele ပိုမိုမြင့်မား Self- အစီရင်ခံဆုလာဘ်မှီခိုနှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့သည်110။ catechol-o-methyl transferase (ဗီဇပြောင်းလဲခြင်း) ၏မျိုးဗီဇမူကွဲများ (COMTdopamine ဂီယာနှင့်စွဲတွင်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရသော)111 ထို့အပြင် compulsive gamers အကြားပိုမိုပျံ့နှံ့ဖြစ်သတင်းပို့ခဲ့ကြသည်110.
compulsive စျေးဝယ်အတွက် ဦး နှောက် function ကို
လတ်တလောလေ့လာမှုမှာ112, compulsive စျေးဝယ်များနှင့်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှု multi- အဆင့်ဝယ်ယူမှုအလုပ်အပေါ်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည်113 fMRI ကာလအတွင်း။ ကန ဦး ထုတ်ကုန်တင်ဆက်မှုအဆင့်တွင်၊ compulsive shoppers သည် NAc တွင်ထိန်းချုပ်မှုများထက်ပိုမိုအားကောင်းသည့်လုပ်ဆောင်မှုကိုပြသခဲ့သည်။ နောက်ဆက်တွဲဈေးနှုန်းတင်ဆက်မှုအဆင့်တွင် compulsive shoppers များသည်ထိန်းချုပ်မှုများထက် insula နှင့် ACC ကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုနည်းကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ထိုအရာသည်အပြီးသတ်ဝယ်ယူသူများကနိဂုံးချုပ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အဆင့်တွင်ပိုမိုအားကောင်းအောင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
compulsive စျေးဝယ်အတွက် Neurotransmitter လှုပ်ရှားမှု
ကြည်လင်ပြတ်သားသောရလဒ်များကိုသေးငယ်တဲ့ Open-label ကိုရုံးတင်စစ်ဆေးအတွက် citalopram နှင့်အတူတွေ့မြင်ခဲ့ကြသည်114။ တုံ့ပြန်သူများအကြား double-blind, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ -controlled အုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ပွင့်လင်းတံဆိပ်ကာလနှင့်အတူစတင်သေးငယ်တဲ့ရုံးတင်စစ်ဆေး citalopram များအတွက်နောက်ထပ်အပြုသဘောဆောင်တဲ့ရလဒ်တွေကို115။ ဤတွေ့ရှိချက်များသည်မဖြစ်မနေစျေးဝယ်ခြင်းတွင်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော serotonergic ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုကြိုတင်ပံ့ပိုးပေးသည်။ သို့သော်အခြား SRI များမှဆိုးကျိုးများ (ဥပမာ - fluvoxamine,116,117 escitalopram118) စျေးဝယ်ခြင်းအတွက် SRI များ၏လက်တွေ့အသုံးဝင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများမေးပါ။
မိသားစုသမိုင်း / မျိုးရိုးဗီဇ၊
အကန့်အသတ်ရှိသောအချက်အလက်များအရအတင်းအကျပ်စေခိုင်းသူများသည်စိတ်ပညာဗေဒနှင့်ရင်းနှီးသောမိသားစု ၀ င်များရှိရန်ပိုမိုဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်119,120။ အဘယ်သူမျှမကွဲပြားခြားနားမှုနှစ်ခု serotonin Transporter ဗီဇ၏ကြိမ်နှုန်းတွင်တွေ့မြင်ခဲ့သည် (၅-HTT) အတင်းအကျပ်စျေးဝယ်ခြင်းနှင့်မပါဘဲတစ် ဦး ချင်းစီအတွက် polymorphic121.
kleptomania အတွက် ဦး နှောက် function ကို
ventromedial prefrontal cortical ဒေသများအတွက်အတော်လေးဆင်းရဲသောအဖြူ - ကိစ္စသမာဓိရှိ kleptomania တွင်တွေ့မြင်ခဲ့သည်122.
kleptomania အတွက် Neurotransmitter လှုပ်ရှားမှု
serotonergic ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ပတ်သက်။ တွေ့ရှိချက်ကိုက်ညီမှုပါပြီ။ trombelet- ဆင်းသက်လာ serotonin သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အနိမ့်နံပါတ်များကို kleptomania အစီရင်ခံခဲ့သည်123,124serotonergic ကမောက်ကမဖြစ်မှုအကြံပြု; သို့သော် escitalopram အတွက် double-blind, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ၊ အရက်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုမှအပျက်သဘောတွေ့ရှိချက်များ125။ ကောင်းမွန်သောရလဒ်များမှာ naltrexone ကိုနှစ်ခါမျက်စိစမ်းသပ်ခြင်းဖြစ်သည်126 ဖြစ်နိုင်သမျှ opioidergic ပါဝင်ပတ်သက်မှုအကြံပြုအပ်ပါသည်။
kleptomania အတွက်မိသားစုသမိုင်း / မျိုးရိုးဗီဇ
compulsive လိင်အပြုအမူအတွက် ဦး နှောက် function ကို
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်ခြင်းဆိုင်ရာလေ့လာမှုများမှာအကန့်အသတ်ရှိသည်။ တစ် ဦး DTI လေ့လာမှုမှာ129လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်ခြင်းခံရသူများသည်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပျံ့နှံ့မှုကိုဆိုလိုသည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်သည်အခြားအမူအကျင့်စွဲ၏လေ့လာမှုများကနေရလဒ်တွေကိုပုံစံများကိုလိုက်နာခဲ့ပါဘူး53,54,99,101,122.
compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက် Neurotransmitter လှုပ်ရှားမှု
citalopram အတွက်ရလဒ်ကောင်းများသည်လိင်တူဆက်ဆံသူနှင့် bisexual အမျိုးသားများ၌လိင်မဆက်ဆံသောလိင်အပြုအမူကို double blind blindbo ထိန်းချုပ်ထားသည့်လေ့လာမှုတစ်ခုတွင်ဖြစ်နိုင်သော serotonergic ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုဖော်ပြသည်။130.
အတင်းအကျပ်လိင်အပြုအမူအတွက်မိသားစုသမိုင်း / မျိုးရိုးဗီဇ
အကန့်အသတ်ရှိသောတွေ့ရှိချက်များအရအတင်းအကျပ်လိင်ဆက်ဆံမှုပြုကျင့်သူများအနက်မိဘများတွင်အလားတူအခြေအနေမျိုးရှိကြသည်131။ တွေ့ရှိချက်များအရလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်ခံရသူများအနေဖြင့်ဓာတုပစ္စည်းအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာရောဂါများ (SUDs) နှင့်ပထမတန်းဆွေမျိုးများရှိရန်အလားအလာရှိသည်ဟုညွှန်ပြသည်။131.
ပစ္စည်း - အသုံးပြုမှု - ရောဂါတွေ့ရှိချက်တွေနဲ့တူညီခြင်းနှင့်ကွာခြားချက်များ
အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုဆိုင်ရာနဗ်ကြောဆိုင်ရာတွေ့ရှိချက်များမှာနည်းပါးနေဆဲဖြစ်ပြီးစျေးဝယ်ခြင်း၊ kleptomania နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုင်ရာအပြုအမူများအတွက်အချက်အလက်များမှာအလွန်နည်းပါးသည်။ သို့သော်ရရှိနိုင်သည့်အချက်အလက်များသည်ခြုံငုံ။ ရှိသော neurobiological ချို့ယွင်းချက်၏သက်သေသာဓကဖြစ်သည်၊ ၎င်းမှာ SUD တွေ့ရှိချက်များနှင့်တူညီသည်။ ဇယား 1, , 22 နှင့် and33 SUDs နှင့်အပြုအမူစွဲနှိုင်းယှဉ်သတင်းအချက်အလက်ပါရှိသည်။
ဆင်းရဲသောအဖြူရောင်သမာဓိရှိမှုတွေ့ရှိချက်သည်ပစ္စည်းဥစ္စာများအကြားအများဆုံးဖြည့်စွတ်မှုဖြစ်နိုင်သည်132,133 နှင့်အမူအကျင့်စှဲ53,54,99,101,122 (သို့သော်ကြည့်ပါ129 ထင်ရသောပconflictိပက္ခဖြစ်ရလဒ်များကိုသည်။ SUDs အတွက်သိမှု - တာဝန်ရလဒ်များကို50,51,134,135 နှင့် PG40,50,51,136 တိုကျရိုကျဒေသများရှိလျှော့ချလှုပ်ရှားမှုအကြံပြုခဲ့ကြသည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း (ဆုချီးမြှင့်ခြင်းပြုပြင်ခြင်းအပါအ ၀ င်) ၏ရှုထောင့်များနှင့်ပါ ၀ င်သည့်တွေ့ရှိချက်များ၊ သို့သော်တုန့်ပြန်မှုမအောင်မြင်သောအလုပ်များမှရရှိသောရလဒ်များအရ PG တွင် ventral-striatal လုပ်ဆောင်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်။38,40,48 နှင့် SUDs137-140, ဆန့်ကျင်ထင်ရသောရလဒ်များကိုရှိခဲ့ပေမယ့်41,141,142။ တွေ့ရှိချက်များသည်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုတွင် dorsal striatum တွင်ပိုမိုလုပ်ဆောင်မှုများကိုပြသလေ့ရှိသည်43,48 နှင့် SUDs143,144.
အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုနှင့် SUDs များတွင် neurotransmitter လုပ်ဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်သောသက်သေအထောက်အထားဖြည့်စွတ်ဖြစ်တော်မူခဲ့သည်။ အာရုံကြောဓာတုဗေဒသက်သေအထောက်အထားများကြွင်းသောအရာမှာလျှော့ချ dopamine Transporter နှင့် D2 ကဲ့သို့အဲဒီ receptor ရရှိမှုအကြံပြုထားသည်98,102,145,146 နှင့်စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်သောလှုပ်ရှားမှုကာလအတွင်း dopamine လွှတ်ပေးရန်147,148PG ပြည်နယ်တွင်အနားယူနေသည့်အချိန်၌ထင်မြင်ယူဆချက်များကွဲပြားနေသော်လည်း44,45 နှင့် SUDs149နှင့်တစ် ဦး ချင်းကွဲပြားမှု dopamine လွှတ်ပေးရန်သက်ဆိုင်ရာပုံရသည်44,45,150။ Neurochemical တွေ့ရှိချက်အမူအကျင့်စွဲသူများနှင့်ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက differential serotonergic function ကိုအကြံပြုသည်62-66,124 နှင့် SUDs151-153။ dopamine ရောဂါနှင့်အတူလက်တွေ့ရလဒ်များ60,61,154-156 နှင့် serotonin စနစ်များကိုအဓိကပစ်မှတ်ထားဆေးဝါးများ (အဓိကအား SRIs)68-72,157-159) အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုနှင့် SUDs များတွင်အပျက်သဘောဆောင်သောသို့မဟုတ်ရောထွေးနေသောတွေ့ရှိချက်များကိုပြသခဲ့သည်။ opioid antagonists ပါ ၀ င်သည့်လက်တွေ့ရလဒ်များသည်အခြေအနေနှစ်ခုလုံးအတွက်အပြုသဘောဆောင်သည်40,45,73-76,126,160-162။ pharmacologic စုံစမ်းစစ်ဆေးနှင့်အတူကန့်သတ်ရလဒ်များကို PG အတွက် glutamatergic လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုအခန်းကဏ္suggestကိုအကြံပြုအပ်ပါသည်78,79 နှင့် SUDs163,164။ Neurochemical နှင့်လက်တွေ့တွေ့ရှိချက်များက PG တွင် norandrenergic လုပ်ဆောင်မှုအတွက်ဖြစ်နိုင်သောအခန်းကဏ္suggestကိုဖော်ပြသည်80-83 နှင့် SUDs165-167.
မျိုးရိုးဗီဇ (အထူးသဖြင့်မော်လီကျူး) နှင့်မိသားစုသမိုင်းဆိုင်ရာသက်သေအထောက်အထားသည်အမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုအတွက်ကန့်သတ်ထားသည်။ သို့သော်ရရှိနိုင်သည့်အထောက်အထားများက PG အတွက်များစွာအမွေဆက်ခံနိုင်မှုကိုဖော်ပြသည်15,84။ အခြားအပြုအမူစွဲလမ်းမှုအတွက်စိတ်ရောဂါအခြေအနေများတွင်မိသားစုဘေးအန္တရာယ်သက်ရောက်နိုင်သည့်အထောက်အထားရှိသည်71,110,119,120,127,128,131။ SUDs သည်အလွန်အမင်းမျိုးရိုးလိုက်သည်27,168.
cue-induction နှင့် stating-state ပုံရိပ်လေ့လာမှုများမှသက်သေအထောက်အထားများသည်ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုနည်းပါးပြီးကွဲလွဲမှုများလည်းရှိသည်။ ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားခြင်းမှအနားယူခြင်းနှင့်ကြိုတင်အကြောင်းကြားခြင်းသည် ဦး နှောက်ဒေသများစွာတွင်လှုပ်ရှားမှုတိုးမြှင့်ခြင်းရှိကြောင်းအကြံပြုသည်104-106,169။ ventral striatal (လောင်းကစား) နှစ်ခုလုံးအတွက်ပြproblemနာ / PG နှင့် SUD cue-induction လေ့လာမှုများအတွက်ပconflictိပက္ခဖြစ်နေသောရလဒ်များရှိသည်။7,35; Sud7,143,144,170) နှင့်တိုကျရိုကျလှုပ်ရှားမှု171,172။ ပါဝင်သူဝိသေသလက္ခဏာများအတွက်လေ့လာမှုများနှင့်အခြားနည်းစနစ်အသေးစိတ်လေ့လာမှုများအကြားခြားနားချက်များသည်ဤကွဲပြားခြားနားသောရလဒ်များကိုအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်171,172။ ထို့အပြင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအပေါ်မှီခိုမှုပိုဆိုးလာသည်နှင့်အမျှ dopamine ထုတ်လွှတ်မှုလျော့ကျလာသည်173 SUD လေ့လာမှုတွင်ပါ ၀ င်သူများအကြား ventral-striatal လုပ်ဆောင်မှုတွင်သောင်းပြောင်းထွေလာဖြစ်မှုကို ဦး တည်နိုင်သည်။
အချုပ်အားဖြင့်အချက်အလက်များအနေဖြင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုနှင့်ဆူဒစ်များ၌ neurobiological ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုဖော်ပြသည်။ ပိုပြီးဖြည့်စွတ်ရလဒ်တွေကိုအချို့အဖြူ - ကိစ္စသမာဓိရှိ, သိမြင် - အလုပ်စွမ်းဆောင်ရည်, neurotransmitter လှုပ်ရှားမှုနှင့်ခြုံငုံ heritability စဉ်အတွင်း ဦး နှောက် function ကိုပါဝင်ပတ်သက်ပါပြီ။
neurobiology နှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှု၏မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာသုတေသနကိုမကြာသေးမီနှစ်များ၌အထူးသဖြင့် PG၊ အင်တာနက်ကိုသုံးခြင်းနှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားခြင်းများတွင်အရှိန်မြှင့်ခဲ့သည်။ ဗဟုသုတတွင်ကွာဟချက်များကျန်ရှိနေပြီးအခြားအမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုများအပေါ်သုတေသနပြုခြင်းသည်အကန့်အသတ်ရှိသည်။ ရှိပြီးသားသုတေသနကအမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုနှင့် SUDs ကြားရှိမျဉ်းပြိုင်နှိုင်းယှဉ်ချက်ကိုဖော်ပြသည်။ အပိုဆောင်းမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာသုတေသန, အထူးသဖြင့်မော်လီကျူး, တစ် ဦး ချင်းစီအမူအကျင့်စွဲအကြားနှင့်အမူအကျင့်စွဲနှင့် SUDs အကြားတူညီခြင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားမှု delineating အတွက်တန်ဖိုးရှိသောလိမ့်မည်။ Neuroimaging သည်တူညီမှုများနှင့်ကွဲပြားခြားနားမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုစတင်ပေးခဲ့သည်။ ထပ်ဆင့်သုတေသနပြုမှုသည်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောသိမြင်မှုဆိုင်ရာအလုပ်များကိုထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်174။ သမားရိုးကျချဉ်းကပ်မှုများသည်တန်ဖိုးရှိသောဖြစ်သော်လည်းကွန်ပျူတာမော်ဒယ်လ်ကဲ့သို့သောအခြားရွေးချယ်စရာသရုပ်ခွဲနည်းများ174 နောက်ထပ် SUDs နှင့်အတူမျဉ်းပြိုင်သရုပျဖျောနိုငျသညျ။
SUDs အတွက်ညွှန်ပြသည့်ဆေးဝါးများနှင့်ကုထုံးများကိုစမ်းသပ်ခြင်းသာစတင်ခဲ့သည်။ တစ် ဦး ချင်းစီ၏အပြုအမူနှင့်မူးယစ်ဆေးစွဲမှုများပါ ၀ င်သောလေ့လာမှုများသည်စွဲလမ်းမှုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုသမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုပိုမိုနားလည်လာစေနိုင်သည်။ အမျိုးသမီးများသည်အမူအကျင့်စွဲလေ့လာမှုများတွင်အထူးသဖြင့်ရှိပြီးဖြစ်သောမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာလေ့လာမှုများနှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားခြင်းဆိုင်ရာသုတေသနများတွင်မပါ ၀ င်ခြင်းသို့မဟုတ်ကိုယ်စားပြုမှုအားနည်းခြင်းများကိုမကြာခဏခံရလေ့ရှိသည်။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများတွင်အမျိုးသမီးများပါ ၀ င်ပြီးအမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ အမျိုးမျိုးသောဖြစ်ရပ်များသည်လိင်နှင့်သက်ဆိုင်သည်များကိုဆန်းစစ်သင့်သည်။
အထူးသဖြင့်လောင်းကစား၊ အင်တာနက်နှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုသည်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူငယ်များနှင့်သက်ဆိုင်ပုံရသည်2,101,110, longitudinal လေ့လာမှုများတန်ဖိုးရှိသောပါလိမ့်မယ်။ ကူးစက်ရောဂါဆိုင်ရာအချက်အလက်များသည်အပြုအမူစွဲလမ်းမှုအတွက်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာရှိသည်။ အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုများစွာရှိခြင်းကိုအကဲဖြတ်သည့်နိုင်ငံတွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာလေ့လာမှုများက၎င်းအခြေအနေများသည်တစ်သက်တာရှိလူများအားမည်မျှသက်ရောက်မှုရှိသည်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏အသိပညာကိုတိုးမြှင့်စေလိမ့်မည်။ ညီတူညီမျှသဘောတူထားသည့်အဖြေရှာတဲ့စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာကိရိယာများသည်လေ့လာမှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။
■အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုသည် ဦး နှောက်နေရာများနှင့် neurotransmitter စနစ်များတွင်အလုပ်မဖြစ်ခြင်းဖြစ်သည်။
Family မိသားစုသမိုင်း / မျိုးရိုးဗီဇတွေ့ရှိချက်များအရအကျင့်စွဲစွဲလမ်းမှုရှိသည့်မိသားစုများအကြားလောင်းကစားခြင်းနှင့်စိတ်ပညာဆိုင်ရာအန္တရာယ်များအတွက်မျိုးရိုးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
■တွေ့ရှိချက်များက neurobiological နှင့် genetic တွေ့ရှိချက်များအရပစ္စည်းနှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုများအားတူညီသည်။
■အချက်အလက်သည်ပစ္စည်းမဟုတ်သောအပြုအမူများတွင်စွဲလမ်းမှုအဖြစ်အလွန်အကျွံပါ ၀ င်မှုရှိသည်ဟူသောအယူအဆကိုထောက်ခံသည်။
■ရုပ်ဝတ္ထုမဟုတ်သော (သို့) အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုရှိသည့်အချက်အလက်များမှာအကန့်အသတ်ရှိသည်။
■စျေးဝယ်ခြင်း၊ kleptomania နှင့်လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုအထူးသဖြင့်ကန့်သတ်ထားသည်။
ဤလုပ်ငန်းကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအား NIH (K01 AA 019694, K05 AA014715, R01 DA019039, P20 DA027844, RC1 DA028279, RL1 AA017539), VA VISN1 MIRECC၊ Connecticut ဦး စီးဌာနမှစိတ်ကျန်းမာရေးနှင့်စွဲဆောင်မှု ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်သုတေသန Excellence ၏စင်တာတို့ကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထောက်ပံ့ခဲ့သည်။ တာ ၀ န် ၀ တ်ပြုကစားခြင်းဆိုင်ရာအမျိုးသားစင်တာနှင့်လောင်းကစားဆိုင်ရာရောဂါများဆိုင်ရာသုတေသနဌာနမှချီးမြှင့်ခြင်း။ လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်သည့်စာမူပါအကြောင်းအရာများသည်စာရေးသူများ၏တာဝန်သာဖြစ်ပြီး၊ ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ပေးသောအဖွဲ့အစည်းများ၏တရားဝင်အမြင်များကိုသေချာပေါက်မဖော်ပြပါ။
ထုတ်ဖော်: အဆိုပါစာရေးဆရာသူတို့ကဒီစာမူကိုများ၏ content မှလေးစားမှုနှင့်အတူအကျိုးစီးပွားမျှဘဏ္ဍာရေးပဋိပက္ခများကိုရှိသည်သတင်းပို့ပါ။ ဒေါက်တာ Potenza အောက်ပါဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအကူအညီအထောက်အပံ့များသို့မဟုတ်လျော်ကြေးလက်ခံရရှိခဲ့သည်: ဒေါက်တာ Potenza ဘို့တိုင်ပင်ခြင်းနှင့် Boehringer Ingelheim အကြံပေးတော်မူပြီ အဘို့တိုင်ပင်ခြင်းနှင့် Somaxon အတွက်ဘဏ္ဍာရေးအကျိုးစီးပွားရှိပါတယ်ပြီ Disorders လောင်းကစားအပေါ်ကနျြးမာရေးအမျိုးသား Institutes, ဝါရင့်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှု, Mohegan Sun ကကာစီနိုတာဝန်ယူမှုဂိမ်းများအတွက်အမျိုးသားရေးစင်တာနှင့်သုတေသနတို့အတွက်ယင်း၏ဆက်နွယ် Institute မှသုတေသနထောက်ခံမှုရရှိခဲ့နှင့် Psyadon, သစ်တော Laboratories, Ortho-McNeil, Oy ကို-ထိန်းချုပ်ရေး / Biotie နှင့်သိရပါတယ် Glaxo-SmithKline ဆေးဝါး; မူးယစ်ဆေးစွဲ, ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်မမှန်သို့မဟုတ်အခြားကျန်းမာရေးအကြောင်းအရာများနှင့်ဆက်စပ်သောစစ်တမ်းများ, မေးလ်သို့မဟုတ်တယ်လီဖုန်းညှိနှိုင်းပါဝင်ခဲ့ပြီ ဥပဒရုံးများနှင့်ထိန်းချုပ်မှုမမှန် impulse နှင့်ဆက်စပ်သောကိစ္စများအတွက်ဖက်ဒရယ်အများပြည်သူနောက်ခံလူ၏ရုံးခန်းများအတွက်တိုင်ပင်တော်မူပြီ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်စွဲန်ဆောင်မှုများပြဿနာလောင်းကစားန်ဆောင်မှုများအစီအစဉ်၏ Connecticut ဦးစီးဌာနများတွင်လက်တွေ့စောင့်ရှောက်မှုပေးသည်; အမျိုးသားကျန်းမာရေး၏ Institutes နှင့်အခြားအေဂျင်စီများများအတွက်ထောက်ပံ့ကြေးပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဖျော်ဖြေမူပြီ ဧည့်သည်-edited ဂျာနယ်ကဏ္ဍများရှိပါတယ်; ခမ်းနားကျည်, CME ဖြစ်ရပ်များနှင့်အခြားလက်တွေ့သို့မဟုတ်သိပ္ပံနည်းကျနေရာများအတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာပို့ချချက်အားပေးတော်မူပြီ; နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကျမ်း၏ကြေညာသူအဘို့စာအုပ်တွေသို့မဟုတ်စာအုပ်အခန်းကြီးထုတ်ပေးလျက်ရှိသည်။
1. အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအသင်း။ စိတ်ရောဂါ၏ရောဂါနှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ်။ 4th edition, text revision American Psychiatric Association; ဝါရှင်တန်ဒီစီ: 2000 ။
et al 2. Frascella J ကို, Potenza MN, ဘရောင်း LL ။ မျှတသော ဦး နှောက်အားနည်းချက်များသည်မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းမရှိသောစွဲလမ်းမှုအတွက်လမ်းဖွင့်ပေးသည်။ 2010: 294-315 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
၃။ Holden C. 'အမူအကျင့်' စွဲလမ်းမှု - သူတို့တည်ရှိသလား။ သိပ္ပံ 3; 2001 (294): 5544-980 ။ [PubMed]
အဆိုပြုထားသော DSM-V တွင် Holden C. အမူအကျင့်စွဲလမ်းမှု သိပ္ပံ 4; 2010 (327): 5968 ။ [PubMed]
5. Karim R ကို, Chaudhri P. အပြုအမူစွဲ: ခြုံငုံသုံးသပ်။ J ကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမူးယစ်ဆေးဝါးများ။ 2012; 44 (1): 5-17 ။ [PubMed]
6 ။ Potenza MN ။ မမှန်သည် non-ပစ္စည်းဥစ္စာ-related အခြေအနေများပါဝင်သည် addictive သငျ့သလော စွဲလမ်း။ 2006; 101: 142-151 ။ [PubMed]
7. Potenza MN ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားနှင့်မူးယစ်ဆေးစွဲ၏ neurobiology: ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်နှင့်အသစ်တွေ့ရှိချက်။ Philos Trans R ကို Soc Lond B Biol သိပ္ပံ။ 2008; 363 (1507): 3181-3189 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
8. Nestler EJ ။ စွဲများအတွက်ဘုံမော်လီကျူးလမ်းကြောင်းရှိပါသလား? နတ်နေရော့စီ။ 2005; 8 (11): 1445-1449 ။ [PubMed]
9. Crabbe JC ။ အယ်ဒီတာ: အရက်မှီခိုမှုအတွက်သက်ဆိုင်သောကြွက်နှင့်လူ့ phenotypes ၏အဆင်ပြေ။ စွဲ Biol ။ 2010; 15 (2): 103-108 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
10. Leeman RF, Heilig M, Cunningham CL ။ အီသနောသုံးစွဲမှု - ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သို့တိုင်းတာသင့်သနည်း။ လူ့နှင့်တိရိစ္ဆာန် phenotypes အကြားအဆင်ပြေစေရန်အောင်မြင်ခြင်း။ စွဲ Biol ။ 2010; 15 (2): 109-124 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
11. Potenza MN ။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ လောင်းကစားခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောအပြုအမူများ၏တိရိစ္ဆာန်ပုံစံများ၏အရေးပါမှု - စွဲလမ်းမှုအတွက်ဘာသာပြန်ခြင်းသုတေသနအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ Neuropsychopharmacology ။ 2009; 34 (13): 2623-2624 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
၁၂။ Zeeb FD, Robbins TW, Winstanley CA. အသစ်သောကြွက်လောင်းကစား Task ကိုအသုံးပြု။ မှန်းအဖြစ်လောင်းကစားအပြုအမူ၏ Serotonergic နှင့် Dopaminergic မော်ဂျူ။ Neuropsychopharmacology ။ 12; 2009 (34): 10-2329 ။ [PubMed]
13. Shaffer HJ ။ ထူးဆန်းတဲ့ bedfellows: ရောဂါဗေဒလောင်းကစားနှင့်စွဲမှုတစ်ခုဝေဖန်အမြင်။ စွဲ။ 1999; 94 (10): 1445-1448 ။ [PubMed]
14. Grant J, Potenza အမ်အောက်စ်ဖို့ Impulse Control Disorders ၏လက်စွဲစာအုပ်။ အောက်စ်ဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်၊ နယူးယောက်: 2012 ။
15. Lobo DS, ကနေဒီ JL ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစား၏မျိုးရိုးဗီဇရှုထောင့်: shared မျိုးရိုးဗီဇအားနည်းချက်များနှင့်အတူရှုပ်ထွေးသောရောဂါ။ စွဲ။ 2009; 104 (9): 1454-65 ။ [PubMed]
16. Potenza MN, Steinberg MA, Mclaughlin SD ။ လောင်းကစားဟယ်လင်းကို အသုံးပြု၍ ပြaနာရှိသည့်လောင်းကစားသမားများ၏ဝိသေသလက္ခဏာများတွင်ကျား - မကွဲပြားမှု။ စိတ်ရောဂါကုသမှု၏အမေရိကန်ဂျာနယ်။ 2001; 158 (9): 1500-1505 ။ [PubMed]
17. Brewer ဂျေအေ, Potenza MN ။ အာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါနှင့်စိတ်ကြွဆေးထိန်းချုပ်မှုရောဂါများ၏မျိုးရိုးဗီဇ - မူးယစ်ဆေးစွဲမှုနှင့်ဆက်ဆံရေး။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး Pharmacol ။ 2008; 75 (1): 63-75 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
18. Leeman RF, Potenza MN ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုရောဂါများအကြားတူညီချက်နှင့်ကွဲပြားခြားနားမှု: Impulse နှင့် compulsivity အပေါ်တစ် ဦး အာရုံ။ စိတ်ပညာ။ 2012; 219 (2): 469-490 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
19. Barrot M, Olivier JD, Perrotti LI ။ အဆိုပါနျူကလိယအတွက် CREB လှုပ်ရှားမှုစိတ်ခံစားမှုလှုံ့ဆော်မှုမှအပြုအမူတုံ့ပြန်မှု၏တံခါးစောင့် shell ကိုထိန်းချုပ်မှု accumbens ။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2002; 99 (17): 11435-40 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
20. Avena မိုင်, Hoebel BG ။ သကြားမှီခိုမှုကိုအားပေးသည့်အစားအစာသည်အမ်ဖီတမင်းပမာဏနည်းသောအပြုအမူဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2003; 122 (1): 17-20 ။ [PubMed]
21. Avena မိုင်, Hoebel BG ။ အမ်ဖီတမင်း - အာရုံခံကြွက်များသည်သကြားဓာတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သော hyperactivity (Cross-sensitization) နှင့်သကြား hyperphagia တို့ကိုပြသည်။ ဆေးဝါးဗေဒဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 2003; 74 (3): 635-639 ။ [PubMed]
22. Chambers RA, Taylor JR, Potenza MN ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်လှုံ့ဆျောမှု၏ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ neurocircuitry: စွဲအားနည်းချက်တစ်ခုအရေးပါသောကာလ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု၏အမေရိကန်ဂျာနယ်။ 2003; 160 (6): 1041-1052 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
23. Everitt BJ, Robbins TW ။ မူးယစ်ဆေးစွဲမှုအတွက်အားဖြည့်ပေးသည့်အာရုံကြောစနစ်များ - လုပ်ရပ်များမှအကျင့်စရိုက်များအထိ၊ နတ်နေရာသစ်။ 2005; 8 (11): 1481-1489 ။ [PubMed]
24. Jentsch JD၊ တေလာ JR ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအတွက် frontostriatal ကမောက်ကမဖြစ်မှုကနေရရှိလာတဲ့ Impulse: ဆုလာဘ် -related လှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်အပြုအမူ၏ထိန်းချုပ်မှုများအတွက်ဂယက်ရိုက်။ Psychopharmacology (Berl) 1999; 146 (4): 373-90 ။ [PubMed]
25 ။ Koob gf, Volkow ND ။ စွဲလမ်း၏ Neurocircuitry ။ Neuropsychopharmacology ။ 2010; 35 (1): 217-38 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
26. Arnsten AF ။ "ကိုယ်စားပြုအသိပညာ" ၏ prefrontal cortical ကွန်ရက်များအပေါ် catecholamine နှင့်ဒုတိယ messenger လွှမ်းမိုးမှု: မျိုးရိုးဗီဇနှင့်စိတ်ရောဂါ၏လက္ခဏာများအကြားတစ် ဦး ဆင်ခြင်တုံတရားပေါင်းကူး။ Cereb Cortex ။ 2007; 17 (ပျော့ပျောင်း 1): i6-15 ။ [PubMed]
27. Kendler KS, Chen XN, Dick D၊ မျိုးဗီဇရောဂါနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာရောဂါများ၏မော်လီကျူးမျိုးရိုးဗီဇများတွင်လတ်တလောတိုးတက်မှုများ။ နတ်နေရာသစ်။ 2012; 15 (2): 181-189 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al 28. Potenza MN, Xian H, Shah K ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားနှင့်ယောက်ျားအတွက်စိတ်ကျရောဂါမှမျိုးဗီဇပံ့ပိုးမျှဝေခဲ့သည်။ Arch ဗိုလ်ချုပ်စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005; 62 (9): 1015-21 ။ [PubMed]
29. Slutske WS, Eisen S, True WR, et al ။ အမျိုးသားများတွင်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်းနှင့်အရက်သေစာမှီခိုခြင်းတို့အတွက်မျိုးရိုးဗီဇအားနည်းခြင်း။ Arch ဗိုလ်ချုပ်စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2000; 57 (7): 666-73 ။ [PubMed]
et al 30. Giddens JL, Xian H, Scherrer JF ။ အထီးလူ ဦး ရေအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါနှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဖို့မျိုးရိုးဗီဇပံ့ပိုးမှုများကိုမျှဝေခဲ့သည်။ J ကိုအကျိုးသက်ရောက်စေ Disord ။ 2011; 132 (3): 406-412 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
31. Hodgins, DC, Stea JN, Grant JE ။ လောင်းကစားမမှန်။ Lancet ။ 2011; 378 (9806): 1874-84 ။ [PubMed]
32. Leeman RF, Potenza MN ပါကင်ဆန်ရောဂါရှိ Impulse Control Disorders: လက်တွေ့လက္ခဏာနှင့်သက်ရောက်မှု။ Neuropsychiatry (လန်ဒန်) 2011 ခုနှစ်; 1 (2): 133-147 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
33. Leeman RF, Billingsley BE, Potenza MN ။ ပါကင်ဆန်ရောဂါရှိ Impulse Control Disorders: နောက်ခံနှင့်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုတို့အတွက် update ။ Neurodegenerative ရောဂါစီမံခန့်ခွဲမှု။ စာနယ်ဇင်းအတွက်။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
၃၄။ Potenza Mn SMaSP et al ။ လောင်းကစားခြင်းသည်ရောဂါဗေဒဆိုင်ရာလောင်းကစားခြင်းအတွက်တိုက်တွန်းခြင်းဖြစ်သည်။ အလုပ်လုပ်သောသံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်လေ့လာမှု။ Arch ဗိုလ်ချုပ်စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 34; 2003 (60): 8-828 ။ [PubMed]
35. Goudriaan AE, De Ruiter MB, Van Den Brink W, et al ။ cue ဓာတ်ပြုခြင်းနှင့်စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသည့်ပြgambနာရှိသည့်လောင်းကစားသမားများ၊ ဆေးလိပ်သောက်သူအများအပြားနှင့်ကျန်းမာသောထိန်းချုပ်မှုများနှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်ကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုပုံစံများ - fMRI လေ့လာမှု။ စွဲ Biol ။ 2010; 15 (4): 491-503 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al 36. Crockford DN, Goodyear B, Edwards က J ကို။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းများအတွက် cue- သွေးဆောင် ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှု။ Biol စိတ်ရောဂါ။ 2005; 58 (10): 787-795 ။ [PubMed]
37. Potenza MN, Leung HC, Blumberg HP၊ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းများအတွက် ventromedial prefrontal cortical function ကိုတစ်ခု fMRI stroop အလုပ်လေ့လာမှု။ စိတ်ရောဂါကုသမှု၏အမေရိကန်ဂျာနယ်။ 2003; 160 (11): 1990-1994 ။ [PubMed]
et al 38. Reuter J ကို, Raedler T က, နှင်းဆီ M က။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း mesolimbic ဆုလာဘ်စနစ်၏ activation လျှော့နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ နတ်နေရာသစ်။ 2005; 8 (2): 147-148 ။ [PubMed]
et al 39. Tanabe J ကို, Thompson က L ကို, Claus အီး။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချစဉ်အတွင်းလောင်းကစားခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းများမပြုလုပ်မီ prefrontal cortex လှုပ်ရှားမှုကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ လူ့ ဦး နှောက်မြေပုံ။ 2007; 28 (12): 1276-1286 ။ [PubMed]
et al 40 Balodis IM, Kober H, Worhunsky PD ။ ငွေကြေးဆိုင်ရာဆုလာဘ်များနှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားအတွက်ဆုံးရှုံးမှုများကိုလုပ်ဆောင်နေစဉ်အတွင်းရှေ့မှောက်လှုပ်ရှားမှုလျော့နည်းသွားသည်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2012; 71 (8): 749-57 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
41. Miedl SF, Fehr T, Meyer G ။ fMRI ကဖော်ပြသည့်အတိုင်းနီးပါးလက်တွေ့ကျသောဘလက်ဂျတ်ဂိတ်ဇာတ်ကွက်တွင်လောင်းကစားခြင်းပြproblemနာ၏ Neurobiological ဆက်စပ်မှုများ။ စိတ်ရောဂါ Res-Neuroim ။ 2010; 181 (3): 165-173 ။ [PubMed]
42. ပါဝါ Y၊ Goodyear B၊ Crockford Ne Neural Correlates သည်လောင်းကစားသမားများအတွက်ချက်ချင်းဆုချီးမြှင့်ခြင်းကိုပိုမိုနှစ်သက်သည် fMRI လေ့လာမှု။ J ကို Gambl လုံး။ ၂၀၁၁ [PubMed]
43. Pallanti S, Haznedar MM, Hollander အီး။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားအတွက် Basal Ganglia လှုပ်ရှားမှု: တစ် fluorodeoxyglucose-positron ထုတ်လွှတ် tomography လေ့လာမှု။ Neuropsychobiology ။ 2010; 62 (2): 132-8 ။ [PubMed]
et al 44 Linnet J ကို, Moller တစ် ဦး က, Peterson အီး။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားများနှင့်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုအတွက် dopaminergic neurotransmission နှင့် Iowa လောင်းကစား Task ကိုစွမ်းဆောင်ရည်အကြားပြောင်းပြန်အသင်းအဖွဲ့။ စိတ်ပညာ၏စကင်ဒီနေးဂျာနယ်။ 2011; 52 (1): 28-34 ။ [PubMed]
45. Linnet J, Moller A၊ Peterson E ။ အိုင်အိုဝါလောင်းကစားခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ventral striatum တွင် Dopamine ထုတ်လွှတ်မှုသည်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားတွင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုအဆင့်တိုးခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ စွဲ။ 2011; 106 (2): 383-390 ။ [PubMed]
et al 46. Potenza MN, Walderhaug E, Henry S ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအတွက် Serotonin 1B အဲဒီ receptor ပုံရိပ်။ ကမ္ဘာ့ဖလား J ကို Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ ၂၀၁၁ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al 47. De Greck M, Enzi B, Prösch U ။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသက်ဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများပြုပြင်စဉ်ကာလအတွင်းရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားများ၏ဆုလာဘ် circuitry အတွက်အာရုံခံလှုပ်ရှားမှုလျော့နည်းသွားသည်။ လူ့ ဦး နှောက်မြေပုံ။ 2010; 31 (11): 1802-1812 ။ [PubMed]
48 Habib RDM ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းများအတွက် "အနီးလွဲချော်" အကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက် Neurobehavioral သက်သေအထောက်အထား။ J ကို Exp စအို Behav ။ 2010; (93): 313-328 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al 49. Van Holst RJ, Veltman DJ သမား, Büchel C ။ ပြProbleနာကိုလောင်းကစားခြင်း၌ပုံပျက်နေသောမျှော်မှန်းထားသောကုဒ်များ: အမျှော်လင့်နေသူသည်စွဲလမ်းနေသလော။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2012; 71 (8): 741-748 ။ [PubMed]
50. De Ruiter MB, Veltman DJ၊ Goudriaan AE စသည်။ Response Perseveration နှင့်အမျိုးသားပြProbleနာလောင်းကစားသမားများနှင့်ဆေးလိပ်သောက်သူများအတွက်ဆုနှင့်ပြစ်ဒဏ်အတွက် Ventral Prefrontal Sensitivity ။ Neuropsychopharmacology ။ 2009; 34 (4): 1027-1038 ။ [PubMed]
51. De Ruiter MB, Oosterlaan J, Veltman DJ သည်။ တားဆီးထိန်းချုပ်မှုတာဝန်စဉ်ပြlersနာလောင်းကစားသမားများနှင့်မိုးသည်းထန်စွာဆေးလိပ်သောက်အတွက် dorsomedial prefrontal cortex အလားတူ hyporesponsiveness ။ မူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်မှီခို။ 2012; 121 (1-2): 81-89 ။ [PubMed]
52. Verdejo-Garcia A၊ Lawrence AJ, Clark L. Impulsivity သည်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုပြordersနာများအတွက်အားနည်းချက်အမှတ်အသား - အန္တရာယ်ကြီးမားသောသုတေသန၊ ပြproblemနာရှိသည့်လောင်းကစားသမားများနှင့်မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ့လေ့လာမှုများမှတွေ့ရှိချက်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ Neurosci Biobehav ဗျာ 2008; 32 (4): 777-810 ။ [PubMed]
et al 53 Joutsa J, Saunavaara J, Parkkola R ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအတွက် ဦး နှောက်အဖြူကိစ္စသမာဓိ၏ကျယ်ပြန့်ပုံမှန်မဟုတ်သော။ စိတ်ရောဂါကုသမှု: Neuroimaging ။ 2011; 194 (3): 340-346 ။ [PubMed]
54. Yip SW, Lacadie C, Xu J ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်အရက်အလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်မှီခိုရန်၎င်း၏ဆက်ဆံရေးအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Corpus callosal အဖြူကိစ္စသမာဓိလျှော့ချ။ ကမ္ဘာ့ဖလား J ကို Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ ၂၀၁၁ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al 55 Blum K, Sheridan PJ, Wood RC ။ ဆုလာဘ်ချို့တဲ့ syndrome ရောဂါတစ်ခုဆုံးအဖွတျအဖြစ် D2 dopamine အဲဒီ receptor ဗီဇ။ ဆေးပညာ၏တော်ဝင် Society ၏ဂျာနယ်။ 1996; 89 (7): 396-400 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
56. Joutsa J, Johansson J, Niemelä S, et al ။ Mesolimbic dopamine ထုတ်လွှတ်ခြင်းသည်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်း၏လက္ခဏာပြင်းထန်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည် NeuroImage ။ 2012; 60 (4): 1992-1999 ။ [PubMed]
57. Zack M, Poulos CX Gamble နှင့်အမ်ဖီတမင်းဆေးကြောခြင်းနှင့်ပြProbleနာရှိသည့်လောင်းကစားသမားများအတွက်လောင်းကစားနှင့်ဆိုင်သော Semantic Network များ။ Neuropsychopharmacol ။ 2004; 29 (1): 195-207 ။ [PubMed]
58. Zack M, Poulos CX D2 ၏ရန်သူသည်လောင်းကစားဝိုင်းတွင်လောင်းကစားခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ Neuropsychopharmacology ။ 2007; 32 (8): 1678-86 ။ [PubMed]
et al 59. Tremblay လေး, Desmond RC, Poulos CX ။ Haloperidol သည်ဂိမ်းကစားခြင်းနှင့်ကျန်းမာသန်စွမ်းသောထိန်းချုပ်မှုများတွင်ကစားပွဲလောင်းကစားခြင်း၏အဓိကကျသောကဏ္aspectsများကိုပြုပြင်သည်။ စွဲ Biol ။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်။ [PubMed]
et al 60. Fong T က, Kalechstein တစ် ဦး က, Bernhard B က။ ဗီဒီယိုဖဲချပ်ဝေကစားသမားလောင်းကစားသူများအတွက်ကုသမှုအတွက် olanzapine ကို double-blind, ရလဒ်များအရအိပ်ယာဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားသောစမ်းသပ်ချက်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျး Behav ။ 2008; 89 (3): 298-303 ။ [PubMed]
61 Mcelroy SL, နယ်လ်ဆင်အီး, Welge J ကို, et al ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစား၏ကုသမှုအတွက် Olanzapine: တစ်အနုတ်လက္ခဏာကျပန်းရလဒ်များအရအိပ်ယာ -controlled ရုံးတင်စစ်ဆေး။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2008; 69 (3): 433-440 ။ [PubMed]
et al 62 Pallanti S, Bernardi S, Allen A ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားအတွက် Serotonin function ကို - Sumatriptan မှကြီးထွားမှုဟော်မုန်းတုံ့ပြန်မှု။ J ကို Psychopharmacol ။ 2010; 24 (12): 1802-1809 ။ [PubMed]
63 Decaria Cm, Begaz T, EH ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားအတွက် Serotonergic နှင့် noradrenergic function ကို။ CNS Spectr ။ 1998; 3: 38-45 ။
64. Marazziti D, Golia F, Picchetti M, et al ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအတွက် platelet serotonin Transporter ၏သိပ်သည်းဆလျော့နည်းသွားသည်။ Neuropsychobiology ။ 2008; 57 (1-2): 38-43 ။ [PubMed]
ရောဂါဗေဒအထီးလောင်းကစားသမားတွေအတွက် 65. Nordin C. T ကအီးပြောင်းလဲ CSF 5-HIAA သဘောထား။ CNS Spectr ။ 1999; 4: 25-33 ။ [PubMed]
et al 66. Pallanti S က, Bernardi S, Quercioli L ကို။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းများအတွက် serotonin ကမောက်ကမဖြစ်မှု: ပါးစပ် m-CPP မှရလဒ်များအရအိပ်ယာနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် prolactin တုံ့ပြန်မှုတိုးလာသည်။ CNS Spectr ။ 2006; 11: 956-964 ။ [PubMed]
67. Bullock လုပ် SA, Potenza MN ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစား: Neuropsychopharmacology နှင့်ကုသမှု။ လက်ရှိ Psychopharmacology ။ 2012; 1: 67-85 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
68. Blanco ကို C, Petkova အီး, Ibanez A, et al ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဘို့ fluvoxamine ၏ရှေ့ပြေးရလဒ်များအရအိပ်ယာ -controlled လေ့လာမှု။ အမ်း Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2002; 14 (1): 9-15 ။ [PubMed]
et al 69 Hollander အီး, Decaria Cm, Finkell Jn ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားအတွက်ကျပန်း double- မျက်စိကန်း fluvoxamine / ရလဒ်များအရအိပ်ယာ crossover ရုံးတင်စစ်ဆေး။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2000; 47: 813-817 ။ [PubMed]
70. Kim Sw, Grant Je, Adson De ရောဂါဗေဒလောင်းကစားရောဂါကုသမှု paroxetine ၏ထိရောက်မှုနှင့်လုံခြုံမှုကို double- blind, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ -controlled လေ့လာမှု။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2002; 63: 501-507 ။ [PubMed]
၇၁။ Grant JE, Kim SW, Potenza MN ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစား Paroxetine ကုသမှု: တစ် ဦး က Multi- စင်တာကျပန်းထိန်းချုပ်ထားရုံးတင်စစ်ဆေး။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 71; 2003 (53): 8s-200s ။
72. Saiz-Ruiz J, Blanco C, Ibáñez A, et al ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစား၏ Sertraline ကုသမှု: ရှေ့ပြေးလေ့လာမှု။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005; 66 (1): 28-33 ။ [PubMed]
73. Grant JE, Potenza MN, Hollander အီး။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစား၏ကုသမှုအတွက် Opioid ရန်သူ Nalmefene ၏ Multicenter စုံစမ်းစစ်ဆေး။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2006; 163 (2): 303-312 ။ [PubMed]
74 ။ je ကင်မ် SW, Hartman ကယ်ပေးသနား။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားများ၏ကုသမှုထဲမှာ opiate ရန် naltrexone ၏တစ်ဦးကို double-မျက်စိကန်း, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled လေ့လာမှုအားတိုက်တွန်းလိုက်သည်။ လက်တွေ့စိတ်ရောဂါကုသမှု၏ဂျာနယ်။ 2008; 69 (5): 783-789 ။ [PubMed]
et al 75 Grant Grant, Odlaug BL, Potenza MN ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစား၏ကုသမှုအတွက် Nalmefene: multicentre, double- မျက်စိကန်း, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ -controlled လေ့လာမှု။ စိတ်ရောဂါကုသမှု၏ဗြိတိသျှဂျာနယ်။ 2011; 197 (4): 330-331 ။ [PubMed]
76. Kim SW, Grant JE, Adson DE, et al ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစား၏ကုသမှုကို double- မျက်စိကန်းသော naltrexone နှင့်ရလဒ်များအရအိပ်ယာနှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှု။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2001; 49 (11): 914-921 ။ [PubMed]
တစ်ပြိုင်နက်တည်းအရက်အသုံးပြုမှုရောဂါနှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစား၏ကုသမှုအတွက် 77. Toneatto T က, အမှတ်တံဆိပ် B က, Selby P. တစ် ဦး ကကျပန်း, double- မျက်စိကန်း, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ -controlled naltrexone ။ နံနက် J ကိုစွဲ။ 2009; 18: 219-225 ။ [PubMed]
78. Grant JE, Kim SW ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစား၏ကုသမှုအတွက် Odlaug BL N-acetyl cysteine ​​တစ် glutamate-modulating အေးဂျင့်: တစ် ဦး ကရှေ့ပြေးလေ့လာမှု။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007; 62: 652-657 ။ [PubMed]
79. Grant JE၊ Chamberlain SR၊ Odlaug BL, Potenza MN, Kim SW ။ Memantine ကလောင်းကစားခြင်းရဲ့ပြင်းထန်မှုနှင့်သိမြင်မှုအားနည်းသောလောင်းကစားခြင်းကိုလျှော့ချရန်ကတိပေးသည်။ ရှေ့ပြေးလေ့လာမှုတစ်ခု။ စိတ်ပညာ။ 2010; 212: 603-612 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
80. ရွိုင်းတစ် ဦး က ABRL et al ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစား: တစ် ဦး က psychobiological လေ့လာမှု။ Arch ဗိုလ်ချုပ်စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1988; 45 (4): 369-373 ။ [PubMed]
ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းများအတွက် 81. ရွိုင်းတစ် ဦး က DJJLM Extraversion: noradrenergic function ကို၏အညွှန်းကိန်းနှင့်အတူဆက်စပ်။ Arch ဗိုလ်ချုပ်စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1989; 46 (8): 679-681 ။ [PubMed]
et al 82. Meyer, G, Schwertfeger J ကို, Exton က MS ။ ပြproblemနာရှိသည့်လောင်းကစားသမားများအတွက်လောင်းကစားရုံလောင်းကစားခြင်းကို Neuroendocrine တုံ့ပြန်မှု။ Psychoneuroendocrinology ။ 2004; 29 (10): 1272-1280 ။ [PubMed]
83. Pallanti S, Bernardi S, Allen A, et al ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအတွက် Noradrenergic function ကို: clonidine မှတဖြည်းဖြည်းကြီးထွားဟော်မုန်းတုံ့ပြန်မှု။ J ကို Psychopharmacol ။ 2010; 24 (6): 847-53 ။ [PubMed]
84. Slutske WS, Zhu G, Meier MH, et al ။ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်မသန်မစွမ်းလောင်းကစားခြင်းအပေါ်မျိုးရိုးဗီဇနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာလွှမ်းမိုးမှုများ။ Arch ဗိုလ်ချုပ်စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2010; 67 (6): 624-630 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
85. Blanco ကို C, Myers J ကို, Kendler KS ။ လောင်းကစားခြင်း၊ အလွယ်တကူလောင်းကစားခြင်းနှင့်အဓိကစိတ်ကျဝေဒနာနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုခြင်းတို့နှင့်ပေါင်းသင်းခြင်း - ဝက်ဘ်အခြေပြုအဖွဲ့နှင့်အမွှာမွေးချင်းလေ့လာခြင်း။ စိတ်ပညာဆေးပညာ။ 2012; 42 (03): 497-508 ။ [PubMed]
86. Shah KR, Eisen SA, Xian H၊ ရောဂါဗေဒလောင်းကစား၏မျိုးဗီဇလေ့လာမှုများ: နည်းစနစ်တစ်ခုပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်ဗီယက်နမ်ခေတ် Twin Registry ကနေအချက်အလက်များ၏လေ့လာဆန်းစစ်။ J ကို Gambl လုံး။ 2005; 21 (2): 179-203 ။ [PubMed]
87. လာမည့် DE, Gade-Andavolu R, Gonzalez N, et al ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအတွက် neurotransmitter မျိုးဗီဇ၏ထို့အပြင်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ လက်တွေ့မျိုးရိုးဗီဇ။ 2001; 60 (2): 107-116 ။ [PubMed]
88. Sabbatini da Silva Lobo: D, Vallada H, Knight J ။ Discordant Sib-Pairs အတွက် Dopamine ဗီဇနှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစား။ လောင်းကစားလေ့လာရေးဂျာနယ်။ 2007; 23 (4): 421-433 ။ [PubMed]
89. လာရောက် DE, Rosenthal RJ, Lesieur HR, et al ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအတွက် dopamine D2 အဲဒီ receptor ဗီဇ၏လေ့လာမှုတစ်ခု။ Pharmacogenetics ။ 1996;6(3): 223-34 ။ [PubMed]
90. et al DE, Gade R၊ Wu S ။ စွဲလမ်းအပြုအမူအတွက် dopamine D1 အဲဒီ receptor ဗီဇ၏အလားအလာအခန်းကဏ္ of ၏လေ့လာရေး။ မော်လီကျူးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1997;2(1): 44-56 ။ [PubMed]
91. et al DE, Gonzalez N, Wu S, ။ TDrette Syndrome, ADHD, ရောဂါဗေဒလောင်းကစားနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုအတွက် DRD48 မျိုးဗီဇ၏4bp ထပ်ခါတလဲလဲ polymorphic ၏လေ့လာမှုများ impulsive, compulsive, စွဲလမ်းအပြုအမူအတွက်လေ့လာမှုများ။ နံနက် J ကို Med မျိုးရိုးဗီဇ။ 1999; 88 (4): 358-68 ။ [PubMed]
92. Pérez De Castro I, Ibáñez A, Torres P, et al ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားနှင့် D4 အဲဒီ receptor ဗီဇမှာအလုပ်လုပ်တဲ့ DNA ကို polymorphic အကြားမျိုးဗီဇအသင်းအဖွဲ့လေ့လာမှု။ Pharmacogenetics ။ 1997;7(5): 345-348 ။ [PubMed]
93. Lim S, Ha J, Choi SW, et al ။ ကိုရီးယားလူ ဦး ရေအတွက်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားနှင့် Dopamine D1, D2, D3 နှင့် D4 Receptor မျိုးဗီဇ၏ Polymorphisms အပေါ်အသင်းအဖွဲ့လေ့လာမှု။ လောင်းကစားလေ့လာရေးဂျာနယ်။ 2011: 1-11 ။ [PubMed]
94. De Castro IP၊ Ibánez A၊ Saiz-Ruiz J စသည်တို့။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဖို့မျိုးရိုးဗီဇအလှူငွေ: အ serotonin Transporter ဗီဇ (5-HTT) မှာသက်ရောက် DNA ကို polymorphic အကြားဖြစ်နိုင်သောအသင်းအဖွဲ့နှင့်ထိခိုက်ယောက်ျား။ Pharmacogenetics နှင့် Genomics ။ 1999;9(3): 397-400 ။ [PubMed]
95. Ibañez A၊ Perez De Castro I, Fernandez-Piqueras J, et al ။ MAO-A နှင့် MAO-B မျိုးဗီဇရှိရောဂါဗေဒလောင်းကစားနှင့် DNA polymorphic အမှတ်အသားများ။ မော်လီကျူးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2000;5(1): 105-109 ။ [PubMed]
96. De Castro IP, Ibanez A, Saiz-Ruiz J, et al ။ အဆိုပါ Mao-A မှာရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်အလုပ်လုပ်တဲ့ DNA ကို polymorphic များအကြားတစ်ပြိုင်တည်းအပြုသဘောအသင်းအဖွဲ့နှင့် 5-HT Transporter ဗီဇ။ Mol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2002; 7: 927-928 ။ [PubMed]
97. Liu J, Gao XP, Osunde I, et al ။ အင်တာနက်စွဲရောဂါ၏ဒေသတွင်းတစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းကိုတိုးမြှင့်ခြင်း - ပြည်နယ်လည်ပတ်မှုဆိုင်ရာသံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်လေ့လာမှု။ Chin Med J (၂၀၁၀) ၂၀၁၀၊ ၁၂၃ (၁၄) - ၁၉၀၄-၁၉၀၈ ။ [PubMed]
et al 98. Kim SH, Baik SH, Park CS ။ အင်တာနက်စွဲသူများနှင့် striatal dopamine D2 receptors များကိုလျော့ချပေးသည်။ နေပြည်တော်။ 2011; 22 (8): 407-11 ။ [PubMed]
99. Lin F, Zhou Y, Du Y, et al ။ အင်တာနက်စွဲရောဂါနှင့်အတူဆယ်ကျော်သက်များတွင်ပုံမှန်မဟုတ်သောအဖြူကိစ္စသမာဓိ: တစ်ကျေးရွာအုပ်စု -based Spatial စာရင်းဇယားလေ့လာမှု။ PLoS တစ်ခုမှာ။ 2012;7(1): e30253 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
100. Zhou Y, Lin FC, Du YS, et al ။ အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုအတွက်မီးခိုးရောင်ကိစ္စပုံမှန်မဟုတ်သောအရာများ - voxel-based morphometry လေ့လာမှု။ Eur J ကို Radiol ။ 2011; 79 (1): 92-5 ။ [PubMed]
101. Yuan K၊ Qin W, Wang, G ။ အင်တာနက်စွဲရောဂါနှင့်အတူမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရှိအဏုဇီဝဗေဒမူမမှန်မှုများ။ PLoS တစ်ခုမှာ။ 2011 ခုနှစ်,6(6): e20708 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al 102. Hou H ကို, Jia S က, Hu S ကို။ အင်တာနက်စွဲရောဂါရှိသူများတွင် Striatal dopamine သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုလျှော့ချ။ J ကို Biomed ဇီဝနည်းပညာ။ 2012; 2012: 854524 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
103. Lee YS, Han DH, Yang KC ။ အလွန်အကျွံအင်တာနက်အသုံးပြုသူများအတွက် 5HTTLPR polymorphic နှင့်စိတ်ထား၏ဝိသေသလက္ခဏာများကဲ့သို့စိတ်ကျရောဂါ။ J ကိုအကျိုးသက်ရောက်စေ Disord ။ 2008; 109 (1-2): 165-9 ။ [PubMed]
104. Park HS, Kim SH, Bang SA, et al ။ အင်တာနက်ဂိမ်းအလွန်အကျွံသုံးစွဲသူများတွင်ဒေသဆိုင်ရာ ဦး နှောက်ဂလူးကို့စ်ဇီဝြဖစ်ပြောင်းလဲမှု - 18F-fluorodeoxyglucose positron ထုတ်လွှတ်မှု tomography လေ့လာမှု။ CNS Spectr ။ 2010; 15 (3): 159-66 ။ [PubMed]
105 ။ ko CH, လျူ GC, Hsiao S က, et al ။ အွန်လိုင်းဂိမ်းစွဲလမ်း၏ဂိမ်းကစားတတ်ပြီးသူနဲ့ဆက်စပ်ဦးနှောက်လုပ်ငန်းဆောင်တာ။ J ကိုစိတ်ရောဂါ Res ။ 2009; 43 (7): 739-47 ။ [PubMed]
106. Ko CH, Liu GC, Yen JY, et al ။ ဦး နှောက်ဆက်စပ်မှုသည်အင်တာနက်ဂိမ်းကစားခြင်းနှင့်စိတ်ကြိုက်ဘာသာရပ်များအတွက် cue ထိတွေ့မှုအောက်တွင်အွန်လိုင်းဂိမ်းများကိုတမ်းတမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ စွဲ Biol ။ ၂၀၁၁ [PubMed]
107. Han DH, Kim YS, Lee YS, et al ။ ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားခြင်းနှင့်အတူ cue- သွေးဆောင်, prefrontal cortex လှုပ်ရှားမှုအပြောင်းအလဲများကို။ Cyberpsychol Behav Soc Netw ။ 2010; 13 (6): 655-61 ။ [PubMed]
၁၀. Dong G, Huang J, Du X. ဆုလာဘ်ခံစားမှုပိုမိုမြင့်မားစေခြင်းနှင့်အင်တာနက်စွဲသူများအတွက်အရှုံးမခံနိုင်ခြင်းကိုလျှော့ချခြင်း - ခန့်မှန်းတွက်ဆနေစဉ်အတွင်း fMRI လေ့လာမှုတစ်ခု။ J ကိုစိတ်ရောဂါ Res ။ 108; 2011 (45): 11-1525 ။ [PubMed]
109. Han DH, Lyoo IK, Renshaw PF ။ On-line ဂိမ်းစွဲနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကစားသမားနှင့်အတူလူနာအတွက်ကွဲပြားခြားနားဒေသဆိုင်ရာမီးခိုးရောင်ကိစ္စပမာဏ။ J ကိုစိတ်ရောဂါ Res ။ 2012; 46 (4): 507-15 ။ [PubMed]
110. Han DH, Lee YS, Yang KC, et al ။ အင်တာနက်ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားခြင်းဖြင့် dopamine ဗီဇများနှင့်မြီးကောင်ပေါက်များတွင်မှီခိုမှုအားဆုချသည်။ J ကိုစွဲ Med ။ 2007; 1 (3): 133-8 ။ [PubMed]
et al 111. Yoshimoto K ကို, Mcbride WJ, Lumeng L ကို။ အရက်သည်နျူကလိယနျူကလီးယားတွင် dopamine နှင့် serotonin ထုတ်လွှတ်မှုကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်။ အရက်။ 1992;9(1): 17-22 ။ [PubMed]
et al 112. Raab, G, Elger ကို C, Neuner M က။ ဝယ်ယူမှုဝယ်ယူမှုအပြုအမူ၏အာရုံကြောလေ့လာမှု။ စားသုံးသူမူဝါဒ၏ဂျာနယ်။ 2011 ခုနှစ်, 34 (4): 401-413 ။
et al 113. Knutson B, Rick S, Wimmer GE ။ ဝယ်ယူမှု၏အာရုံကြောခန့်မှန်း။ Neuron ။ 2007; 53 (1): 147-56 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al 114. Koran LM, Bullock KD, Hartston HJ ။ compulsive စျေးဝယ်၏ Citalopram ကုသမှု: တစ် Open- တံဆိပ်လေ့လာမှု။ လက်တွေ့စိတ်ရောဂါကုသမှု၏ဂျာနယ်။ 2002; 63 (8): 704-708 ။ [PubMed]
115. Koran LM, Chuong HW, Bullock KD, et al ။ compulsive စျေးဝယ်ခြင်းရောဂါအတွက် Citalopram: ပွင့်လင်းတံဆိပ်ခေါင်းလေ့လာမှုနှင့်နောက်တဖန်ကို double- မျက်စိကန်းသောရပ်စဲ။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2003; 64 (7): 793-8 ။ [PubMed]
et al 116. က Black DW, Gabel J ကို, Hansen J ကို။ ဝယ်ယူသောရောဂါကုသမှုကို fluvoxamine နှိုင်းယှဉ်ချက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကနှစ်ကြိမ်မျက်စိကန်းခြင်း။ အမ်း Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2000; 12 (4): 205-11 ။ [PubMed]
et al 117. Ninan PT, Mcelroy SL, Kane CP ။ ဝယ်ယူမှုနှင့်အတူလူနာကုသမှုအတွက် fluvoxamine ၏ရလဒ်များအရအိပ်ယာထိန်းချုပ်ထားသောလေ့လာမှု။ J ကို Clin Psychopharmacol ။ 2000; 20 (3): 362-6 ။ [PubMed]
et al 118. Koran LM, Aboujaoude EN, Solvason B ။ ဝယ်ယူလွယ်သောရောဂါများအတွက် Escitalopram: မျက်မမြင်နှစ်ခြင်းရပ်ဆိုင်းခြင်းလေ့လာမှု။ J ကို Clin Psychopharmacol ။ 2007; 27 (2): 225-7 ။ [PubMed]
119. Mcelroy SL, Phillips က Ka, Keck PE ။ , ဂျူနီယာ obsessive compulsive ရောင်စဉ်ရောဂါ။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1994; 55 (ပျော့ပျောင်း): 33-51 ။ ဆွေးနွေးခြင်း 52-3 ။ [PubMed]
120. Black DW, Repertinger S, Gaffney GR ။ မိသားစုသမိုင်းနှင့်အတင်းအကျပ် ၀ ယ်ယူသူများ၌စိတ်ရောဂါဖြစ်ပွားမှု - ပဏာမတွေ့ရှိချက်များ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1998; 155 (7): 960-963 ။ [PubMed]
et al 121. Devor EJ, Magee HJ, Dill-Devor RM ။ Serotonin Transporter ဗီဇ (5-HTT) polymorphic နှင့် compulsive ဝယ်ယူ။ နံနက် J ကို Med မျိုးရိုးဗီဇ။ 1999; 88 (2): 123-125 ။ [PubMed]
Grant JE, Correia S, Brennan-Krohn T. White သည် Kleptomania တွင်သမာဓိရှိမှုကိုစမ်းသပ်သည်။ ရှေ့ပြေးလေ့လာမှုတစ်ခု။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res ။ 122; 2006 (147-2): 3-233 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
123. Grant က je, Odlaug BL, ကင်မ် SW ။ Kleptomania: လက်တွေ့လက္ခဏာများနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာသုံးစွဲမှုရောဂါများနှင့်ဆက်စပ်မှု။ Am J မူးယစ်ဆေးဝါးအရက်သေစာအလွဲသုံးစားမှု။ 2010; 36 (5): 291-5 ။ [PubMed]
et al 124. Marazziti: D, Presta S က, Pfanner ကို C ။ သိပ္ပံနည်းကျ abstraction, Neuropsychopharmacology ၏အမေရိကန်ကောလိပ် 39 နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေး။ ACNP; San Juan, Puerto Rico: 2000. kleptomania နှင့် compulsive buying ၏ဇီဝဗေဒအခြေခံ။
125. ကိုရမ် LM, Aboujaoude EN, Gamel NN ။ kleptomania ကို Escitalopram ကုသမှု - ပွင့်လင်းသောတံဆိပ်စမ်းသပ်ခြင်း၊ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007; 68 (3): 422-7 ။ [PubMed]
126. Grant က je, ကင်မ် SW, Odlaug BL ။ kleptomania ကိုကုသရာတွင် opiate antagonist naltrexone ကို double-blind နှင့်ရလဒ်များအရအိပ်ယာကိုထိန်းချုပ်သည်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2009; 65 (7): 600-6 ။ [PubMed]
127. Grant JE, Kim KW ။ လက်တွေ့ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့် kleptomania နှင့်အတူ 22 လူနာများ၏ဆက်စပ်စိတ်။ စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2002; 43 (5): 378-384 ။ [PubMed]
et al 128. Mcelroy SL, Hudson JI, ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး H ကို။ အခြားနေရာများတွင်ခွဲခြားထားခြင်းမရှိသော DSM-III-R ထိန်းချုပ်မှုဆိုင်ရာပြdisနာများ - လက်တွေ့လက္ခဏာများနှင့်အခြားစိတ်ရောဂါဆိုင်ရာရောဂါများနှင့်ဆက်စပ်မှု။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1992; 149 (3): 318-327 ။ [PubMed]
129. Miner MH, Raymond N, Mueller BA ။ compulsive လိင်အပြုအမူ၏ထကြွလွယ်သောနှင့် neuroanatomical ဝိသေသလက္ခဏာများ၏ပဏာမစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res ။ 2009; 174 (2): 146-51 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
130. Wainberg ML, Muench F, Morgenstern J ။ လိင်တူချစ်သူနှင့် bisexual ယောက်ျားများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများပြုမှုဆက်ဆံခြင်းကို citalopram နှင့်နှစ်ဆမျက်စိကွယ်ခြင်းလေ့လာခြင်း။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2006; 67 (12): 1968-73 ။ [PubMed]
131. Schneider JP, Schneider BH ။ လိင်စွဲလမ်းမှုမှစုံတွဲပြန်ကောင်းလာခြင်း - လက်ထပ်ခြင်း ၈၈ ခုကိုစစ်တမ်း၏သုတေသနတွေ့ရှိချက်များ။ လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးဖောက်ခြင်း 88; 1996: 3-111 ။
132. Mcqueeny T, Schweinsburg BC, Schweinsburg အေဒီ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မူးရူးသောက်သူများအတွက်အဖြူရောင်ကိစ္စရပ်များကိုသမာဓိရှိခြင်း။ အရက်: လက်တွေ့နှင့်စမ်းသပ်သုတေသန။ 2009; 33 (7): 1278-1285 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
133. Pfefferbaum တစ် ဦး က, Sullivan က EV, Hedehus M က။ In Vivo ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုနှင့်နာတာရှည်အရက်ယမကာတွင်အဖြူရောင်ကိစ္စရပ်များ၏အဏုဇီဝဗေဒဆိုင်ရာအနှောင့်အယှက်များ၏လုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာဆက်စပ်မှုများ။ အရက်: လက်တွေ့နှင့်စမ်းသပ်သုတေသန။ 2000; 24 (8): 1214-1221 ။ [PubMed]
134. Goldstein RZ, Alia-Klein N, Tomasi: D, et al ။ လျော့နည်း prefrontal cortical sensitivity ကိုအားကိုးစွဲအတွက်ချို့ယွင်းလှုံ့ဆျောမှုနှင့်ချုပ်တည်းခြင်းနှင့်ဆက်စပ်? နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007; 164 (1): 43-51 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
135. Goldstein RZ, Tomasi: D, Rajaram S, et al ။ ကိုကင်းစွဲလမ်းအတွက်မူးယစ်ဆေးတွေကို processing အတွက် anterior cingulate နှင့် medial orbitofrontal cortex ၏အခန်းကဏ္.ကို။ အာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2007; 144 (4): 1153-1159 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
136 ။ et al Potenza MN, Leung HC, Blumberg HP က။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေအတွက် ventromedial prefrontal cortical function ကိုတစ်ဦး FMRI Stroop တာဝန်လေ့လာမှု။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2003; 160 (11): 1990-4 ။ [PubMed]
137. Beck A, Schlagenhauf က F, Wüstenberg T က။ ဆုလာဘ်မျှော်လင့်ထားစဉ်အတွင်း Ventral Striatal Activation အရက်၌ Impulsivity နှင့်ဆက်စပ်သော။ Biol စိတ်ရောဂါ။ 2009; 66 (8): 734-742 ။ [PubMed]
et al 138. Hommer: D, Bjork J ကို, Knutson B က။ အရက်၏ကလေးများအတွက်လှုံ့ဆျောမှု။ အရက် Clin Exp Res ။ 2004; 28: 22A ။
et al 139. Peters J, Bromberg ဦး, Schneider S က။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ဆေးလိပ်သောက်သူများအတွက်ဆုလာဘ်မျှော်လင့်နေစဉ်အတွင်း ventral striatal activation ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါ၊ 2011; 168: 540-549 ။ [PubMed]
140. Wrase J ကို, Schlagenhauf က F, Kienast T က။ ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့၏ကမောက်ကမဖြစ်မှု detoxified အရက်သမားအတွက်အရက်တပ်မက်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ NeuroImage ။ 2007; 35 (2): 787-794 ။ [PubMed]
et al 141. Jia Z ကို, Worhunsky PD, ကာရိုး KM ။ ကိုကင်းမှီခိုမှုတွင်ကုသမှုရလဒ်နှင့်ဆက်စပ်သောငွေကြေးဆိုင်ရာမက်လုံးများအပေါ်အာရုံကြောဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုကိုကန ဦး လေ့လာခြင်း။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2011; 70 (6): 553-560 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ဆေးခြောက်သုံးစွဲသူများအတွက်မူးယစ်ဆေးဝါးမဟုတ်သောဆုလာဘ်များမျှော်လင့်နေစဉ်အတွင်း Nestor L၊ Hester R၊ Garavan အိပ်ချ်။ NeuroImage ။ 142; 2010 (49): 1-1133 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al 143. Volkow ND, Wang GJ, Telang F ။ Dorsal Striatum ရှိကိုကင်းနှင့် Dopamine - ကိုကင်းစွဲစွဲလမ်းစေသောတွန်းအား။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2006; 26 (24): 6583-6588 ။ [PubMed]
et al 144. Vollstädt-Klein S ကို, Wichert က S, Rabinstein J ကို။ ကန ဦး၊ ပုံမှန်နှင့်မဖြစ်မနေအရက်အသုံးပြုခြင်းကို ventral မှ dorsal striatum သို့ cue processing ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။ စွဲ။ 2010; 105 (10): 1741-1749 ။ [PubMed]
et al 145. Shi J ကို, Zhao LY, Copersino ML ။ methadone ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုသမှုစဉ်အတွင်းနှင့်ဘိန်းဖြူသုံးစွဲသူများအတွက်ကြာရှည်စွာရှောင်ကြဉ်ပြီးနောက် dopamine သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်မူးယစ်ဆေးစွဲသူများ၏ PET ပုံရိပ်။ Eur J ကို Pharmacol ။ 2008; 579 (1-3): 160-6 ။ [PubMed]
146. Volkow ND, Fowler JS, Wang GJ ။ အဆိုပါစွဲလူ့ ဦး နှောက်: ပုံရိပ်လေ့လာမှုများမှ Insights ။ J Clin Invest ။ 2003; 111 (10): 1444-1451 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
147. Schlaepfer TE, Pearlson GD, Wong DF, et al ။ လူ့ဘာသာရပ်များရှိ dopamine receptors တွင်သွေးကြောသွင်းအားဖြည့်ကိုကင်းနှင့် [C-11] raclopride အကြားယှဉ်ပြိုင်မှုအတွက် PET လေ့လာမှု။ စိတ်ရောဂါကုသမှု၏အမေရိကန်ဂျာနယ်။ 1997; 154 (9): 1209-1213 ။ [PubMed]
et al 148. Ritz M က, သိုးသငယ် R ကို, Goldberg ။ dopamine သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင်ကိုကင်းဓာတ်ပြုမှုသည်ကိုကင်းအားကိုယ်တိုင်စီမံအုပ်ချုပ်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သည်။ သိပ္ပံ 1987; 237 (4819): 1219-1223 ။ [PubMed]
et al 149. Crits-Christoph P ကို, Newberg တစ် ဦး က, Wintering N ကို။ ကိုကိုးမှီခိုဘာသာရပ်များအတွက် Dopamine Transporter အဆင့်ဆင့်။ မူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်မှီခို။ 2008; 98 (1-2): 70-76 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
150. Volkow nd ။ Opioid-Dopamine အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ - ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာရောဂါများနှင့်ကုသမှုအတွက်ဂယက်ရိုက်ခြင်း။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2010; 68 (8): 685 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
151. Füs-Aime M သည် EMJGDTBGLMILM EArly-onset အရက်သမားများသည်နှောင်းပိုင်းတွင်စတင်သောအရက်သမားများထက်နှာချေနှောက်အကျိတ်အရည် ၅-hydroxyindoleacetic acid ပါဝင်သည်။ Arch ဗိုလ်ချုပ်စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 5; 1996 (53): 3-211 ။ [PubMed]
152. Ratsma je, Van Der Stelt O, Gunning WB ။ လူသားများတွင်အသည်းအသန်အားနည်းခြင်းဆိုင်ရာအာရုံကြောဆိုင်ရာအမှတ်အသားများ။ အရက်နှင့်အရက်။ 2002; 37 (6): 522-533 ။ [PubMed]
153. Coiro V ကို, Vescovi PP ။ ရှည်လျားသောရေရှည်တည်တံ့သော Alkoholics များတွင်ကြီးထွားမှုဟော်မုန်းလျှို့ဝှက်ချက်၏ချွတ်ယွင်း SEROTONERGIC နှင့် GABAERGIC ထိန်းချုပ်မှုများတည်ရှိမှု။ အရက်နှင့်အရက်။ 1997; 32 (1): 85-90 ။ [PubMed]
et al 154. Bender S က, Scherbaum N ကို, Soyka M က။ abstinence ကိုထိန်းသိမ်းရာတွင် dopamine D2 / D3 ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုသူ tiapride ၏ထိရောက်မှု - အရက်သေစာမှီခိုနေသည့်လူနာ ၂၉၉ ယောက်ကိုကျပန်း၊ မျက်စိကန်းသော၊ Int J ကို Neuropsychopharmacol ။ 299; 2007 (10): 5-653 ။ [PubMed]
155. Kampman KM, Pettinati H, Lynch KG ။ ကိုကင်းမှီခိုမှုကိုကုသရန် olanzapine ကိုရှေ့ပြေးစမ်းသပ်မှုတစ်ခု။ မူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်မှီခို။ 2003; 70 (3): 265-273 ။ [PubMed]
156. Shaw GK, Waller S, Majumdar SK, et al ။ Tiapride မကြာသေးမီက detoxified အရက်သမားအတွက် relapse ၏ကာကွယ်တားဆီးရေး၌တည်၏။ Br J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1994; 165 (4): 515-23 ။ [PubMed]
et al 157. Amato L ကို, Minozzi S, Pani PP ။ ကိုကင်းမှီခိုမှုအတွက် Antipsychotic ဆေးဝါးများ။ Cochrane ဒေတာဘေ့စ Syst Rev. 2007; (3): CD006306 ။ [PubMed]
et al 158. Guardia J ကို, Segura L ကို, Gonzalvo B က။ Double-Blind, Placebo-Controlled Olanzapine လေ့လာမှုကိုအရက်မှီခိုမှုရောဂါကုသမှု။ အရက်: လက်တွေ့နှင့်စမ်းသပ်သုတေသန။ 2004; 28 (5): 736-745 ။ [PubMed]
159. Torrens M, Fonseca F, Mateu G, et al ။ comorbid စိတ်ကျရောဂါနှင့်အတူသို့မဟုတ်မပါဘဲပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်အတွက်စိတ်ကျရောဂါ၏ထိရောက်မှု: တစ် ဦး ကစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် meta-analysis သည်။ မူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်မှီခို။ 2005; 78 (1): 1-22 ။ [PubMed]
et al 160. Lobmaier P ကို, Kornor H ကို, Kunoe N ကို။ Opioid မှီခိုမှုအတွက်ရေရှည်တည်တံ့သောထုတ်လွှတ်မှု Naltrexone ။ Cochrane ဒေတာဘေ့စ Syst ဗြာပြIssueနာ 2. အနုပညာ။ 2008 [PubMed]
161. Minozzi S, Amato L, Vecchi S, et al ။ opioid မှီခိုမှုအတွက်ပါးစပ် naltrexone ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုသမှု။ Cochrane ဒေတာဘေ့စ Syst ဗြာပြIssueနာ 4. အနုပညာ။ ၂၀၁၁ [PubMed]
162. Rösner S, Hackl-Herrwerth A, Leucht S, et al ။ အရက်မှီခိုမှုအတွက် Opioid ရန်။ Cochrane ဒေတာဘေ့စ Syst ဗြာ 2010, Issue 12 အနုပညာ။ ၂၀၁၀
et al 163. Larowe SD က, Mardikian P ကို, Malcolm R ကို။ ကိုကိုး - မှီခိုတစ် ဦး ချင်းစီအတွက် N-acetylcysteine ​​၏လုံခြုံမှုနှင့်သည်းခံစိတ်။ နံနက် J ကိုစွဲ။ 2006; 15 (1): 105-10 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
164. Krupitsky EM, Neznanova O, Masalov: D ။ memantine ၏အသက် - လူနာပြန်လည်ထူထောင်အတွက် cue- သွေးဆောင်အရက်တပ်မက်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007; 164 (3): 519-523 ။ [PubMed]
165. Jobes M, Ghitza U, Epstein: D ။ ကိုလိုနီဒင်းသည်ကိုကင်းသုံးစွဲသူများအတွက်စိတ်ဖိစီးမှုကိုတွန်းအားပေးမှုကိုပိတ်ပင်ထားသည်။ စိတ်ပညာ။ 2011 ခုနှစ်; 218 (1): 83-88 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ကြွက်များကိုရှာဖွေနေသည့်ဘိန်းဖြူနှင့်ကိုကင်းဆီသို့ Shaham Y၊ Erb S၊ Stewart ဂျေစိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောစိတ်ဖိစီးမှု - ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ ဦး နှောက်သုတေသနသုံးသပ်ချက်များ။ 166; 2000 (33): 1-13 ။ [PubMed]
167. Sinha R ကို, Kimmerling တစ် ဦး က, Doebrick ကို C ။ lofexidine ၏စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် cue- သွေးဆောင် opioid တဏှာနှင့် opioid abstinence နှုန်းများအပေါ်သက်ရောက်မှုများ: အကြိုတွေ့ရှိချက်များ။ စိတ်ပညာ။ 2007; 190 (4): 569-574 ။ [PubMed]
et al 168. Kreek MJ, Nielsen DA, Butelman ER ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှုနှင့်စွဲလမ်းမှုအတွက်စိတ်ဖိစီးမှု၊ စွန့်စားရမှု၊ စိတ်ဖိစီးမှုအပေါ်တုံ့ပြန်မှုနှင့်အားနည်းချက်အပေါ်မျိုးရိုးဗီဇလွှမ်းမိုးမှုများ။ နတ်နေရာသစ်။ 2005; 8 (11): 1450-7 ။ [PubMed]
169 ။ ဟန် DH, Hwang JW, Renshaw PF ။ Bupropion ကြံ့ကြံ့ခိုင်ရပ်တည်လွှတ်ပေးရန်ကုသမှုကိုအင်တာနက်ကဗီဒီယိုဂိမ်းစွဲလမ်းနှင့်အတူလူနာအတွက်ဗီဒီယိုဂိမ်းနှင့် cue-သွေးဆောင်ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုဘို့တဏှာလျော့နည်းစေပါသည်။ Exp Clin Psychopharmacol ။ 2010; 18 (4): 297-304 ။ [PubMed]
170. Kils Cd SJBQCK et al ။ ကိုကင်းစွဲစွဲလမ်းနေသည့်မူးယစ်ဆေးစွဲလိုမှုနှင့်ဆက်စပ်သောအာရုံကြောလှုပ်ရှားမှု။ Arch ဗိုလ်ချုပ်စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2001; 58 (4): 334-341 ။ [PubMed]
et al 171. Dom, G, Sabbe B ကို, Hulstijn W ။ ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုမမှန်ခြင်းနှင့် orbitofrontal cortex: အမူအကျင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းနှင့် neuroimaging လေ့လာမှုများစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်။ Br J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005; 187 (SEPT ။ ): 209-220 ။ [PubMed]
172. Wilson SJ, Sayette MA, Fiez ဂျေအေ။ မူးယစ်ဆေးတွေကို Prefrontal တုံ့ပြန်မှု: တစ် ဦး က neurocognitive ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ နတ်နေရော့စီ။ 2004;7(3): 211-214 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်စွဲလမ်းမှုတွင် ၁၇၃ Volkow ND၊ Fowler JS, Wang GJ, Swanson JM, Telang F. Dopamine: ပုံရိပ်လေ့လာခြင်းနှင့်ကုသမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ အာရုံကြော၏မော်ကွန်းတိုက်။ 173; 2007 (64): 11-1575 ။ [PubMed]
နှောင့်နှေးခြင်းနှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေလျှော့ခြင်းဖြင့်ထင်ရှားရောဂါဗေဒကစားသမားအတွက် 174. Miedl SF, Peters J ကို, Buchel C. ပြောင်းလဲအာရုံကြောဆုလာဘ်ကိုယ်စားပြု။ Arch ဗိုလ်ချုပ်စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2012; 69 (2): 177-86 ။ [PubMed]